ပါကငျဖောကျမယျ – My Blog
ရပွီလား…. ထပျသှငျးပေးဦး… ဒီလောကျဆိုရငျကော ထပျသှငျးပေးဦး ရော့ ထပျသှငျးပေးဦး ဖူးဖူးရောငျကာ မို့မောကျပွီး နီတှတျနသေော ခိုငျနှငျး၏ စောကျဖုတျထဲသို့ ဦးရဲနောငျက သူ့လီးကို တဈဆငျ့ခငျြး သှငျးနခွေငျး ဖွဈသညျ။ ဦးရဲနောငျမှာ အသကျငါးဆယျ ကြျောနပွေီ ဖွဈသော အဘိုးကွီးဖွဈသညျ။ ခိုငျနှငျးမှာ ဦးရဲနောငျမှ မှေးစားထားသော သမီးဖွဈသညျ။ ဦးရဲနောငျမှာ အိမျထောငျရှိစဉျကာလက သားသုံးယောကျ ထှနျးကားခဲ့သညျ။ သမီးလိုခငျြခဲ့သျောလညျး မိနျးမဖွဈသူမှာ သားသုံးယောကျ မှေးပေးပွီးနောကျ ဆုံးသှားသညျ။ သမီးလိုခငျြ၍ ရူးနသေော ဦးရဲနောငျအတှကျ တဈရကျတှငျ အိမျရှတှေ့ငျ မှေးကငျးစ ကလေးငယျလေး ပဈခထြားသညျကို တှရေ့သဖွငျ့ မဖွဈမနေ မှေးစားလိုကျရသညျ။ သမီးလေး လိုခငျြနခေိုကျမို့ နတျပေးသညျ့ သမီးလေးအဖွဈ မှေးစားခဲ့သညျ။ သမီးလေးကို သားသုံးယောကျနှငျ့ တနျးတူ ပညာသငျပေးခဲ့သညျ။ သားသုံးယောကျမှာ သူ၏ စီးပှားရေးအရှိနျအဝါကွောငျ့ ဆိုးခငျြတိုငျးဆိုး ကဲခငျြတိုငျးကဲသလောကျ သမီးလေးမှာ လိမ်မာသညျ။
သမီးလေး ဆယျတနျးအောငျသှားသညျ့နောကျ ကှနျပြူတာသငျတနျးမြား အင်ျဂလိပျစာသငျတနျးမြား ပို့ပေးသညျ။ သမီးလေးက ကွိုးစားသဖွငျ့ ကှနျပြူတာလညျးတျော အင်ျဂလိပျစာလညျးတျော ဖွဈနသေညျ။ ထိုတျောလှ တတျလှသော သမီးလေးအပျေါ စိတျရိုငျးဝငျမိသူမှာ သူကိုယျတိုငျပငျ ဖွဈနသေညျ။ သဘာဝစညျးကမျးနဲ့အညီ ဖှံ့ဖွိုးတိုးတကျလာသော ရငျသားမြား တငျလုံးမြားမှာ သူ့အား ဘယျလိုမှ ထိနျးခြုပျ၍ မရနိုငျတော့သဖွငျ့ တဈည သမီးအခနျးကို ဝငျအိပျခဲ့သညျ။ ခိုငျနှငျး၏ ဘဝထိုညတှငျ ကြေးဇူးရှငျအား အပြိုစငျဘဝဖွငျ့ ကြေးဇူးဆပျခှငျ့ရသညျ။ အကိုကွီး အတျောလေး ဆာနသေညျဟု ထငျပါသညျ။ ထိုညတဈညတညျး သုံးခြီဆှဲသညျ။ သူမက နာပငျနာငွားသျောလညျး ကွိတျမှိတျအောငျ့ခံပေးသညျ။ နောကျ နှဈရကျ သုံးရကျအထိ အကိုကွီးကို မတှရေ့။ ရှကျ၍လား။ အားနာ၍လား ဘာကွောငျ့တော့ မသိ။ တဈညတှငျ အကိုကွီး ခိုးပွနျလာမှနျး ခိုငျနှငျးသိသညျ။ သားဖွဈကွသော သကျနောငျ၊ လတျနောငျ၊ ဆကျနောငျတို့ မရှိကွ။ ခိုငျနှငျးက အကိုကွီး အခနျးထဲ ဝငျခဲ့သညျ။
အကိုကွီး သိသျောလညျး မသိခငျြယောငျဆောငျနမှေနျး သူမ သိသညျ။ ထို့ကွောငျ့ အဝတျမြား အကုနျခြှတျခလြိုကျသညျ။ အကိုကွီး၏ ဘေးတှငျ အသာလေး ထိုငျခကြာ ဘောငျးဘီဇဈကို ဖွုတျလိုကျပွီး ဘောငျးဘီကို နညျးနညျးခြှတျသညျ။ အတှငျးခံကို ပှတျသပျပေးရာ မကွာမီ အကိုကွီး ဟာကွီးက နှေးပွီးမာလာသညျ။ အတှငျးခံကို ခြှတျလိုကျသညျ။ မာတောငျနသေော အကိုကွီးလီးကို စစုပျပေးသညျ။ တျောတျောလေးစိုသောအခါ သူမတကျခှပွီး သှငျးထညျ့လိုကျသညျ။ အကိုကွီးကို ကွညျ့လိုကျတော့ သူမကို ကွညျ့နသေညျ။ အကိုကွီးလကျကို ဆှဲယူပွီး နို့မြားကို ကိုငျစသေညျ။ အကိုကွီးက နို့ကိုသာသာလေးကိုငျထားခြိနျမှ သူမလညျး ဆောငျ့ခပြေးသညျ။ အရှိနျကောငျးလာတော့ အကိုကွီးက သူမခါးကို ဖကျကာ ဆှဲအိပျလိုကျသညျ။ အပျေါမှ ခပျပွငျးပွငျးလိုးခသြညျ။ အကိုကွီးလို့ ချေါတော့မယျနျော ကလေးရယျ အကိုကွီးအတှကျ ကလေးက ဘာမဆို ပေးဆပျဖို့ အသငျ့ပါ အကိုကွီးကို ခှငျ့လှတျတယျ မဟုတျလားဟငျ အို အကိုကွီးကလညျး ကလေးက ပေးဆပျဖို့ အသငျ့ပါဆိုမှ။
အကိုကွီးက သူမကို လိုးပွီးခြိနျ ရငျခှငျထဲ ထညျ့ကာ ပါးကို တရှတျရှတျနမျးရငျး ပွောသညျ။ နှုတျခမျးကို ငုံသညျ။ သူမလညျး ပွနျနမျးသညျ။ ကလေးက အရမျးလှလှနျးလို့ပါ ကြေးဇူးပါ အကိုကွီး ခုနက စုပျပေးတော့ မရှံဘူးလား ဟငျ့အငျး ရှံပါဘူး၊ အကိုကွီး အရသာ ပိုရှိအောငျလို့ အကိုကွီးလညျး ကလေးဟာလေးကို လကျြပေးမယျလေ ဟာ ကလေး ငရဲကွီးကုနျမှာပေါ့ ငရဲတှေ ဘာတှေ မလိုပါဘူးကလေးရာ ကောငျးဖို့ပဲလိုတယျ သဘော သဘော ကလေးကို နညျးမြိုးစုံနဲ့ ပိုကောငျးအောငျ လုပျပေးမယျနျော သဘော သဘော ဦးရဲနောငျက သူမကို ခေါငျးအုံးတှငျ အိပျစလေိုကျပွီးနောကျ ပါးမှတဈဆငျ့ အောကျသို့ ဖွညျးဖွညျးခငျြး နမျးဆငျးလာသညျ။ နို့ကိုလညျး အားပါးတရစုပျသညျ။ နံရိုးမြားကို ပှတျသပျသညျ။ ခကျြကို လြှာဖြားဖွငျ့ ကလိသညျ။ အမှေးမပေါကျသေးသော သူမစောကျပတျတဈဝိုကျဘေးကို နှုတျခမျးဖွငျ့ အရငျစုပျနမျးသညျ။ အနမျးနှေးနှေး တဈခကျြရတိုငျး သူမမှာ ကော့တကျနသေညျ။ ရငျခေါငျးထဲမှ ထှကျလာသော ညညျးသံမြားလညျး ထှကျကနြသေညျ။ စောကျစကေို့ စုပျနမျးလိုကျတော့ သူမအျောသညျ။
အား အကိုကွီး အား အရမျးကောငျးတယျ အား သို့နှငျ့ သမီးနှငျ့ အဖမှေ အကိုကွီးနှငျ့ ကလေးဘဝကို ပွောငျးရှခေဲ့သညျ။ သူမအသကျ ဆယျ့ခွောကျ နှဈမှ ယခု နှဈဆယျ့ရှဈ နှဈအထိ ကလေးတှေ လှဈတိုငျး အကိုကွီးစိတျတိုငျးကြ ခံပေးလာခဲ့သညျ။ ပါးစပျနဲ့ ပွီးပေးခွငျး၊ နို့နှငျ့ ပွီးပေးခွငျး၊ ဖငျနဲ့ပွီးပေးခွငျးစသညျ့ နညျးမြိုးစုံဖွငျ့ အကိုကွီး လိုလသေေးမရှိအောငျ ပွုစုလာခဲ့ရာ အကိုကွီးပငျ ဘုရားသှား ကြောငျးတကျအရှယျသို့ ကပျလာခဲ့ပွီ။ သူမကို သမီးအဖွဈဖွငျ့ ကှနျပြူတာ သငျတနျးငယျလေးတဈခု ဖှငျ့ပေးထားသညျ။ သငျတနျးဆိုသညျမှာလညျး အမညျခံမြှသာ။ ကောငျမလေး နှဈယောကျကို လကျထောကျခနျ့ထားပွီး အကိုကွီးနဲ့ ပြျောပါးနသေညျက မြားသညျ။ သို့သျော ခုတလော အကိုကွီး နမေကောငျး ဖွဈနသေဖွငျ့ ငတျနသေညျမှာ နှဈလကြျောပွီ ဖွဈသညျ။ ရောဂါက ကြောကျကပျရောဂါ ဖွဈသညျ။ လူက ဖွညျးဖွညျးခငျြး ပိနျခြုံးလာနသေညျ။ ခါတိုငျး ငတျလြှငျ ငါးရကျ အမြားဆုံးဖွဈသညျ။ ငါးရကျ ငတျသျောလညျး ခှငျ့ရသောနဆေို့လြှငျ ငါးရကျ ငတျခဲ့သမြှ ပွသေညျ။ ခုတော့ ဆကျငတျတော့မညျ့ အနအေထားတှငျ ဖွဈနသေညျ။
လူကွံလြှငျ ဘယျအရာမှ မအောငျမွငျဘူး ဟူသညျမှာ မရှိ။ထပျသှငျးပေးဦး မောငျ ကွောကျတယျ ထပျသှငျးပါဆို ခံတဲ့သူက ထပျသှငျးခိုငျးတာ လိုးနတေဲ့သူက ကွောကျနရေတယျလို့ ရပွီလားဟငျ ထပျသှငျးဦး ဆုံးအောငျသှငျး ကြျောကြျော အမညျရှိသော သငျတနျးသား ကောငျလေးသညျ ခိုငျနှငျးအမညျရှိ ကှနျပြူတာ သငျတနျးပိုငျရှငျ ဆရာမ၏ ဖငျကို လိုးရာမှာ ကွောကျနခွေငျး ဖွဈသညျ။ လေးဘကျထောကျကုနျးပေးထားသော ခိုငျနှငျး၏က တငျကို စှငျ့နအေောငျ နောကျသို့ ပဈထားပေးပွီး သူက ခါးကို နိုကျကာ ဖငျပေါကျကို လိုးရသညျ။ ကြျောကြျောက သူမြားတှလေို လညျလညျဝယျဝယျကွီး မဟုတျ။ နညျးနညျး အူသညျ။ ထို့ကွောငျ့ ဖငျကို တကယျလိုး၍ ရ မရ မသိ ဖွဈနသေညျ။ လီးကတော့ ဖငျပေါကျထဲ တျောတျောလေး မွုပျဝငျနပွေီ ဖွဈသညျ။ ဆုံးအောငျသှငျး ဆိုသဖွငျ့ သူလညျး မရမက ဆကျသှငျးသညျ။ စိမျထားပွီး ထိုးမှပေေးစမျးပါ ခိုငျနှငျး လူရှေးမှနျခဲ့သညျ။ လူက အူကွောငျကွောငျပမေယျ့ လီးက သူမလိုခငျြသညျ့ အဆငျ့မီသညျ။ ကြျောကြျောကို သူမ ဘယျလိုဖနျသနညျး။
ကြျောကြျောက သငျတနျးတှငျ နညျးနညျးထိုငျးသညျ။ ပွောပွီး ခဏနေ ပွနျမသေ့ညျ။ သငျတနျးပွီး၍ နောကျသငျတနျး မရှိသောအခါ သူမက ကြျောကြျောကို ခဏချေါထားသညျ။ ကြျောကြျော မငျးနခေဲ့ဦး ဟုတျ အတနျးသားမြားမြားစားစား မရှိသော သငျတနျးလေး ပွီးဆုံးသှားသောအခါ အားလုံးပွနျကုနျကွသညျ။ မငျး မကျြလုံးလေး ခဏမှိတျထားလိုကျစမျး ကြျောကြျောက ဘုမသိ ဘမသိ မကျြလုံးကို မှိတျလိုကျသညျ။ အကိုကွီး စိတျတိုငျးကြ ဆုတျနယျခဲ့သော သူမနို့သညျ တှဲအိကလြုနီးပါးဖွဈကာ စှငျ့ကားနသေညျ။ ထိုနတှေ့ငျ သူမက နဂိုရျအကွံဖွငျ့ ဘျောလီအတှငျးခံ ဝတျမထား။ ကြျောကြျောခေါငျးကို အသာကိုငျကာ ရငျအနညျးငယျဖှငျ့ပွီး မကျြနှာကို အုပျကာ ပှတျလိုကျသညျ။ ကြျောကြျောက ကွောငျအအ ဖွဈကာ နောကျဆုတျသညျ။ ငွိမျငွိမျနေ ခိုငျနှငျးသညျ နို့ဖွငျ့ ကြျောကြျောမကျြနှာကို ဆကျပှတျသညျ။ ကြျောကြျောကလညျး ရိုးသာရိုးသညျ။ ဒါမြိုးကတြော့ သိသညျ။ သိလညျး သိပမေပေါ့။ စာသငျပေးသောဆရာမ ဟိုဘကျလှညျ့လိုကျတိုငျး ဖငျကွီးက ကားထှကျနသေညျ။
ကားထှကျနသေော ဖငျကိုကွညျ့ရငျး လီးကအငွိမျမနေ။ ခဏ ခဏစိတျကူး ကှငျးထုခဲ့သညျ့ ဖငျကားကားနဲ့ ဆရာမက နို့လာစုပျခိုငျးနတေော့ ကြျောကြျောလညျး ဘာပွောကောငျးမတုနျး ဆိုသညျ့ အနအေထား။ တဈခကျြလောကျ ကွောငျသှားသညျ့ အနအေထားမှ ခိုငျနှငျးအိုးကို မသိမသာဖွငျ့ မရဲတရဲလှမျးကိုငျသညျ။ အိုးကို ကိုငျရမလိုလို မကိုငျရမလိုလိုတော့ ဖွဈနသေေးသညျ။ နို့အုံ အိထှေးထှေးကွီး မကျြနှာမှာ အငမျးမရ အိနသေညျ။ ကြျောကြျောသညျ ခိုငျနှငျး၏ အိုးကွီးကို မိမိရရ ကိုငျဆုတျသညျ။ နောကျမှ ဆရာမ၏ စကဒျဇဈကို ဖွုတျလိုကျသညျ။ စကဒျခြှတျလိုကျပွီးနောကျ ကြျောကြျောက ဒူးထောကျထိုငျခကြာ ဖှေးအိနသေော ပေါငျနှဈဖကျကို ဖကျကာ ပှတျသပျပွီး ပေါငျကွားကို လကျြပေးလိုကျသညျ။ စောကျဖုတျက ပိုပွီး မှောကျနသေညျ။ အမှေးလညျး နညျးသညျ။ စောကျစကေ့တော့ တျောတျောညိုနသေညျ။ ခိုငျနှငျးက ကွမျးပွငျပျေါတှငျ ကားပေးထားရငျး ဘောငျးဘီခြှတျနသေော ကြျောကြျောလီးကို အငမျးမရ လှမျးကွညျ့သညျ။ ကြျောကြေျာ့လီးကွီးကို တှလေို့ကျတော့မှ ရငျထဲက အလုံးကသြှားသညျ။
သူမက ခံသာ ခံခငျြသညျ။ လီးကလေး သေးသေးလေး ဖွဈနမှော။ ပုတိုတိုဖွဈနမှော ကွောကျသညျ။ ခံသာ ခံပေးရသညျ အရသာ မရမညျကို စိုးသညျ။ ခုတော့ ကြျောကြေျာ့လီးက သူလိုအပျသညျ့ စံခြိနျမီသညျ။ အ……. ကြှတျ ကြှတျ တကယျနာလို့ အျောတာလား၊ ဖီးလျပိုရှိလာအောငျ အျောတာလား တော့ ကြျောကြျောမသိ။ ခိုငျနှငျး၏ စောကျဖုတျထဲကို ဒဈအရငျသှငျးပွီး ကြျောကြျောဆကျထိုးသှငျးသညျ။ အဆုံးထိထိုးပွီး ခဏစိမျလိုကျသညျ။ နို့ကို စို့လိုကျသညျ။ ဖွညျးဖွညျးခငျြး ညောငျ့သညျ။ ခပျပွငျးပွငျးလေး ဗငျြးသညျ။ခိုငျနှငျးတျောတျော ကောငျးနသေလို ကြျောကြျောလညျး တျောတျောကောငျးသညျ။ ငါးမိနဈလောကျဆှဲလိုကျရသညျ။ အရညျကို တို့ဟာထဲ မထညျ့နဲ့နျော အပွငျထုတျ သိလား ဟုတျ ပွီးခါနီးတော့ ခိုငျးသညျ့အတိုငျး အရညျကို အပွငျထုတျသညျ။ ကွမျးပွငျ တျောတျောပသှေားသညျ။ ဆရာမက ထပွီး တဈရှုးယူကာ သူ့ဟာကို သူသုတျသညျ။ သူလညျး အကုနျညဈထုတျပွီး အကုနျလုံးကို လိုကျရှငျးပေးလိုကျသညျ။ မောငျ ခငျဗြာ မောငျ ဟုချေါလိုကျသဖွငျ့ ကြျောကြျောလနျ့သှားသညျ။
မ ကို စိတျဆိုးလား ခငျဗြာ မောငျကလညျးကှာ ခငျဗြာခညျြးပဲ ဟုတျကဲ့ခငျဗြ အဲဒါကွောငျ့ မောငျ့ကို အရမျးခဈြမိသှားတာ သိလား ကြျောကြျောမှာ ဘာမှနျး မသိတော့။ အဝတျမြား ပွနျဝတျပွီးကွတော့ နှုတျခမျးခငျြး တျောတျောလေး စုပျဖွဈကွသညျ။ သှားတော့နျော မောငျ၊ အရမျးခဈြတယျ သိလား သညျလိုဖွငျ့ နောကျတဈနေ့ ဆကျလိုးသညျ။ နညျးနညျး ကွမျးလာသညျ။ နောကျတဈနတေ့ော့ နညျးတှေ စုံလာသညျ။ တျောတျောလေးကို နညျးပေါငျးစုံသိသညျ့ ဆရာမပငျ။ ကြျောကြျောပငျ ဖြားယူလောကျသညျ။ ထိုအထဲ ယနေ့ ပိုထူးခွားသညျ။ ယနေ့ ထူးခွားခကျြကိုတော့ဖွငျ့ ကြျောကြျော စှဲလနျးသှားသညျ။ မောငျ့ကို ဒီနေ့ ထူးထူးခွားခွားလေး ဖွဈစခေငျြတယျ ဟုတျ မောငျ နောကျပေါကျကို ခတြာ မွငျဖူးလား ဖငျ ဖငျပေါကျကိုလား အငျးပေါ့ကှ ဗှီဒီယိုထဲမှာတော့ မွငျဖူးတယျ ဒီနေ့ မရဲ့ ဖငျကို ခပြေးရမယျနျော ကြှနျတျော အဲ မောငျ ကွောကျတယျ မောငျကလေ ခံတဲ့သူ ခံနတောတောငျ ကွောကျရတယျလို့မြား ထိုကဲ့သို့ အခွအေတငျ စညျးဝေးပွီးနောကျ ခိုငျနှငျးဖငျပေါကျကို ရှဲစိုသှားအောငျ လကျြပေးလိုကျသညျ။
အစကတော့ သူမလကျြပေးရဲပါ။ ရှံလညျး ရှံသညျ။ သူရှံနမှေနျးသိသဖွငျ့ ခိုငျနှငျးက ဖငျကို စောကျပတျထကျ ပွောငျအောငျ နတေို့ငျး ဆေးကွောငျး၊ စောကျပတျကမှ သိပျမဆေးဖွဈကွောငျး ပွောကာ လကျြခိုငျးသညျ။ စလကျြခါစတော့ နညျးနညျး ရှံသျောလညျး ခဏတော့ အရှိနျတကျသှားသညျ။ ကြုံ့နသေော ခိုငျနှငျးဖငျပေါကျလေး စူပှပှဖွဈလာသညျ။ လြှာနှငျ့ ထိုးမှတေော့ ခိုငျနှငျးတဈယောကျ တရှီးရှီးနှငျ့ကို ဖွဈနသေညျ။ လကျဝါးထဲ တံတှေးထှေးထညျ့ လီးထိပျကို သုတျပွီး သူ့တံတှေးဖွငျ့ ရှဲနဈနသေော ခိုငျနှငျးဖငျပေါကျထဲသို့ လီးခေါငျးကို သိပျထညျ့လိုကျသညျ။ အ.. အု အ………. တျောတျောကွပျသညျ။ မရမက ထိုးထညျ့သျောလညျး မရတော့။ လီးကလညျး နာလာသဖွငျ့ သူတဈဝကျလောကျနဲ့ လိုးသညျ။ ထိုအခါ ခိုငျနှငျးက ထပျသှငျးခိုငျးပွနျသညျ။ ငါးမိနဈလောကျ စိမျပွီး ဖိသှငျးလိုကျတော့ အထာကသြှားသညျ။ စောကျဖုတျက စုပျအားကောငျးသျောလညျး ဖငျက ကွပျတော့ လိုးလို့ကောငျးသညျ။ တဈခါပွနျထုတျပွီး ဖငျပေါကျထဲ တံတှေးထှေးထညျ့ကာ ပွနျသှငျးသညျ။ ကွပျမွဲကွပျသညျ။
တငျလုံးကွီး ခါထှကျနအေောငျ ကြျောကြျောဆောငျ့လိုးတော့သညျ။ ကြျောကြျောစှဲသှားသညျ။ ကာမ အရသာကို ခိုငျနှငျးက အပွညျ့အဝခံစားသညျ။ စောကျဖုတျ၊ ဖငျ၊ ပါးစပျစုံနသေညျ။ ဆရာမက ပါးစပျဖွငျ့ ပွီးပေးတော့ ကြျောကြျောမှာ အားနာနသေေးသညျ။ လြှာပျေါ လီးရညျတှေ အဖှေးသား ကှငျးထုခပြေးလိုကျသညျ။ ခိုငျနှငျးက လြှာပျေါဖှေးတကျနသေော သူ၏ လီးရညျကို တကျတကျစငျကုနျအောငျ မွိုခပြွသညျ။ ပါးစပျထဲ လီးရညျ တဈစကျမှ မကနျြတော့အောငျ ကုနျသှားပွီးနောကျ လီးထိပျတှငျ ကပျကနျြနသေော လီးရညျကိုလညျး စုပျပေးသညျ။ တဈလဆိုသော အတောအတှငျး ကြျောကြျော ထိနျးသိမျးခဲ့သျောလညျး အရကျမူးသောအခါ အဆောငျမှ အတူနေ သူငယျခငျြးကို ထိုအကွောငျး မဖှငျ့ဟဘဲ မနနေိုငျတော့။ထပျသှငျးပေးဦး နှဈယောကျလုံးလား လြှာရှညျလိုကျတာ၊ တဈယောကျက ရှပေ့ေါကျ၊ တဈယောကျက နောကျပေါကျပေါ့ ခိုငျနှငျးသညျ ရတောငျ့ ရခဲအခှငျ့အရေးလေးကို ရသဖွငျ့ အတျောပငျ ဝမျးသာသညျ။ ယောကျြားနှဈယောကျကို တပွိုငျနကျတညျး ခံပေးရာတှငျ။
ယောကျြားမြား နညျးတော့ နညျးသေးသျောလညျး သိပျပွီး မိနျးမပကျြတော့ ဆနျလို့ မဖွဈ။ ကြျောကြျောက သူ့သူငယျခငျြးမှ မဖွဈမနေ လိုကျလာတော့မညျ ပွောတော့ ထိုနေ့ စိတျဆိုးခငျြယောငျဆောငျပွီး ကြျောကြျောကို မပေးလိုကျတော့။ ဆ ဆရာမ.. အဲ မ ဘာဖွဈတာလဲ၊ ဘာလို့ တုနျနတောလဲ ကြှနျ ကြှနျတျော အ အဲ မောငျလေ၊ ဆရာမနဲ့ အကွောငျးကို သူ သူငယျခငျြးတဈယောကျကို ဖှငျ့ ဖှငျ့ပွောမိတယျ ဘာ အဲ အဲဒါ သူ သူငယျခငျြးက မနကျဖနျ လိုကျလာမယျတဲ့ ကြျောကြျော နငျ ငါ့ကို ဘယျအစားထဲ အောကျမနေ့လေို့လဲဟငျ၊ အလိုလိုကျလို့ နငျ အမိုကျစျောကားတာလား အဲ အဲလို မဟုတျ မဟုတျပါဘူးဗြာ၊ အရကျ အရကျမူးပွီး စ စကားကြှံ ကြှံသှားလို့ပါ၊ သူ သူငယျခငျြးက ကြှနျတေျာ့ကို ခွိမျးခြောကျ နပွေီ မငျးကှာ မငျး… ခိုငျနှငျး စိတျအကွီးအကယျြ ဆိုးပွလိုကျသညျ။ သှား ဘာညာငေါကျထုတျလိုကျသညျ။ နောကျနေ့ မလာနဲ့တော့ ဆိုသညျ့ စကားတော့ မပါ။ ကြျောကြျော ထိုနငေို့ကျစိုကျ ငိုကျစိုကျ ပွနျသှားသညျ။ အိမျရှခွေံ့မှ ကြျောကြျောထှကျသှား သောအခါ ခိုငျနှငျး ကွိတျပွုံးလိုကျသညျ။
နောကျ အသံထှကျအောငျပါ ရယျမိလိုကျသညျ။ ထှနျးထှနျးတဲ့ ဆရာမ၊ ဟု ကြျောကြျောမှ မိတျဆကျပေးသညျ။ ထှနျးထှနျးက လကျသှကျသညျ။ သူမ မေးစကေို့ ကိုငျသညျ။ သူမ ပုတျခလြိုကျသညျ။ ငါ ပွောမယျ၊ ငါက မငျးတို့ ထငျတဲ့ အတနျးစားထဲက မဟုတျဘူး၊ အရငျက ဘာပဲဖွဈခဲ့ ဖွဈခဲ့ အခု မငျးတို့ အခနျးထဲက ထှကျသှားကွပါ သူမက ကြျောကြျောရငျဘတျမှ တှနျးလိုကျသညျ။ အခနျ့မသငျ့သယောငျ ဟနျဆောငျက ရငျခှငျထဲ လဲကသြညျ။ ထှနျးထှနျးက နောကျမှ သိမျးဖကျသညျ။ နို့ကွီးကို အတငျးကိုငျကာ နောကျကို တထေ့ားသညျ။ ရုနျးမရသညျ့ အနအေထားသို့ ရောကျအောငျ သူမကိုယျတိုငျ ဖနျတီးပွီးရုနျးသညျ။ ကြျောကြျောက နှုတျခမျးကို စုပျသညျ။ ထှနျးထှနျးက တငျလုံးကွီးကို ဆုတျကိုငျသညျ။ ထှနျးထှနျးက ပိုကွမျးသညျ။ တငျလုံးမြား စုတျပွတျလောကျအောငျ ကိုငျသညျ။ ထမီကိုခြှတျခသြညျ။ ကြျောကြျောပွောတော့ ခငျဗြားက အစုပျကောငျးတယျတဲ့၊ အရငျစုပျပေးပေါ့ ထှနျးထှနျးသညျ သူမကို ထိုငျခအြောငျ နိုကျခကြာ ဘောငျးဘီကိုခြှတျသညျ။ လီးကို ထုတျသညျ။ အားပါး လီးက သူမလိုခငျြသညျ့ ပုံစံရှိသညျ။
ထိပျခြှနျပွီး တုတျ၍ ရှညျသညျ။ ကြျောကြျောလညျး ခြှတျသညျ။ သူမ လီးနှဈခြောငျးကို တဈဖကျစီကိုငျကာ ကှငျးထုပေးလိုကျသညျ။ ခငျဗြားကွီး လိမ်မာနရေကျသားနဲ့ မိုကျခငျြနတေယျ၊ လောလောဆယျတော့ ကြုပျဟာ အရငျစုပျ ခိုငျနှငျးလညျး မကျြစိမှိတျ ပါးစပျဟကာ ထှနျးထှနျး၏ လီးကို တဈခကျြတညျး အာခေါငျစိုကျအောငျငုံလိုကျသညျ။ ပါးစပျ အစှမျးကို ဟပွီးငုံသဖွငျ့ လီးတဈဝကျကြျော မွုပျကာ အာခေါငျကို လာစိုကျသညျ။ သူမဆကျငုံသညျ။ လညျခြောငျးထဲသို့ပငျ လီးရောကျသှားသညျဟု ထငျရသညျ။ မိုကျတယျ ခိုငျနှငျးက ထှနျးထှနျးလီးကို ပွနျကိုငျကာ ကြျောကြျောလီးကို ထပျငုံပေးသညျ။ ကိုယျ့ဟာကွီးကို ကွာကွာငုံပေးပါ အခဈြဆုံးကွီးရဲ့၊ သူ့ဟာက မငျးနညျးနညျးရိုးနပွေီလေ၊ လာပါ ကိုယျ့ဟာကို ငုံ ကြျောကြျောလီးကို ငုံထားသော သူမခေါငျးကို ဆှဲကာ သူမပါးစပျထဲ လီးကို အဆုံးထိုးသှငျးသညျ။ ပွီးတော့ ရမျးလိုကျသေးသညျ။ အူး ဝူးဝူးးး မိုကျတယျ ထှနျးထှနျးက တမိုကျတညျး မိုကျနတေော့သညျ။ ထှနျးထှနျးက လီးစုပျခိုငျးရာ ကွမျးသလို စောကျပတျလကျြလညျး ကွမျးသညျ။
စောကျစကေို့ ကိုကျပွီး ဆှဲရမျးသဖွငျ့ သူမတျောတျောလေး အျောရသညျ။ စောကျခေါငျးထဲကိုလညျး လကျညိုးသုံးခြောငျး ထိုးသှငျးကာ ခပျကွမျးကွမျးမှသေညျ။ လိုးတော့လညျး ခြိနျပွီးနောကျ ပဈလိုးထညျ့သညျ။ သူမက ထငျမထားသညျ့အတှကျ တျောတျောနာသညျ။ အဆုံးထိကို ပဈသှငျးသညျ။ အဆုံးထိ ထုတျသညျ။ လေးငါးခကျြ လုပျပွီးမှ ခပျသှကျသှကျဆှဲသညျ။ ကြျောကြျောနခေဲ့တော့ ဖွဈနသေညျ။ ပကျလကျအိပျပေးထားသော သူမနို့အား ကြျောကြျောက လာစို့သညျ။ ထှနျးထှနျးက သူမပေါငျကို အားကုနျဖွဲကာ စောကျပတျကို အားကုနျဆျောနသေညျ။ ဝူး မောလိုကျတာ၊ ခငျဗြားကွီး အပျေါက တကျဆောငျ့တဲ့အလှညျ့ပေါ့ ကြျောကြျောသညျ ခပျကွမျးကွမျးပငျ ဆှဲနှုတျကာ ပကျလကျအိပျပွီး လီးကို အထောငျလိုကျကိုငျထားသညျ။ သူမ တကျခှလိုကျပွီး တကေ့ာ ဆောငျ့ခလြိုကျသညျ။ ကြျောကြျောကို ချေါလိုကျသညျ။ ထပျသှငျးပေးဦး နှဈယောကျလား တျောတျောထုံသညျ့ ကြျောကြျောကို စိတျတိုမိသေးသညျ။ သို့သျော သူမကို နောကျကနေ ခှကာ ဖငျပေါကျထဲ လီးကို စိုကျခလြိုကျတော့ ကြျောကြျောကို ကြေးဇူးတငျပွနျသညျ။
ကြျောကြေျာ့ ကြေးဇူးကွောငျ့ ခုလို ဇိမျအပွညျ့ခံရသညျ မဟုတျပါလား။ ကြျောကြျောက ထိုးသှငျးလိုကျသညျ့နှငျ့ အောကျကိုလညျး ဆောငျ့ခပြေးသလို ဖွဈနပွေီ။ ထှနျးထှနျးက သူမနို့ကို အောကျကနပွေီး ကွနေအေောငျ ဆုတျကိုငျသညျ။ ငါလညျး ဖငျခြဦးမယျ၊ မငျးအောကျက နဟေကေ့ျော ထှနျးထှနျးက ကြျောကြျောကို ပွောသညျ။ သို့ဖွငျ့ နရောခြိနျးပေးလိုကျသညျ။ ထှနျးထှနျးကို ဖငျဇှတျလိုးမညျ ကွောကျနသေေးသျောလညျး ထှနျးထှနျးက ဖငျကိုတော့ အကွမျးကွီး မခြ။ ဖွညျးဖွညျးခငျြး တော့သညျ။ ဇိမျတမြိုး ရှိသညျ။ အတှေးတှကေ ဟိုရောကျဒီရောကျ ဖွဈနသေညျ။ ဦးရဲနောငျ လီးပြော့ကွီးကို မွငျလိုကျ။ ၎င်းငျး၏ သားသုံးယောကျ မကျြနှာကို မွငျယောငျလိုကျ ဖွဈနသေညျ။ ဘယျတတျနိုငျမလဲလေ။ ကိုယျက ဆာနပွေီကိုးဟု တှကျကာ ဖွတှေေးစဉျ ထှနျးထှနျးက ဖငျထဲကို ခပျကွမျးကွမျးသှငျးလာသဖွငျ့ အားလုံးမကေ့ာ ဖီးလျအစဈတကျလာပွနျသညျ။ ထှနျးထှနျးက သူမပခုံးကိုကိုငျကာ ဖငျကို အားပါးတရ ဆောငျ့လိုးသညျ။ ဖငျပေါကျ အနားစှနျးမြား စုတျပွတျသတျသှားမညျကိုပငျ ကွောကျရသေးတော့။
ကြျောကြျောလီးရညျမြားကို ပါးစပျဖွငျ့ ခံပေးပွီးနောကျ မွိုမခသြေးဘဲ ထှနျးထှနျးမှ ဆကျလကျကှငျးထုခသြညျကို ပါးစပျဟကာ စောငျ့သညျ။ ထှနျးထှနျးလီးရညျမြား ပါးစပျထဲ တဗဈြဗဈြဝငျလာသညျ။ သူမ ထှနျးထှနျးကို မကျြလုံးပငျ့ကွညျ့ပေးသညျ။ ထှနျးထှနျးကလညျး သူမကို ငုံ့ကွညျ့သညျ။ နှုတျခမျးစှနျးတှငျ ပသှေားသော လီးရညျကို လကျညိုးဖွငျ့ သပျကာ စုပျလိုကျသညျ။ လကျဝါးနှဈဖကျထဲသို့ လီးရညျကို ထှေးထုတျသညျ။ ထှနျးထှနျးလီးတှငျ သုတျလိုကျသညျ။ ပွီးမှ လြှာနဲ့ ပွောငျအောငျ လိုကျလကျြပေးသညျ။ လီးရညျမြား ပွောငျသှားတော့ ထှနျးထှနျးလီးက ငိုငျကမြလိုလို ဖွဈပွီးမှ ပွနျတောငျလာသညျ။ ထှနျးထှနျးက သူမကို မတျတတျရပျခိုငျးရငျး နမျးကာ နို့မြားကို ကိုငျသညျ။ တငျးနတေုနျးပဲ၊ ထပျဆှဲမယျနျော ထှနျးထှနျးက သူမနို့ကိုကိုငျရငျး ပွောသညျ။ သူမကိုယျကိုလညျး ဆှဲလှညျ့သညျ။ စားပှဲကို လကျထောကျခိုငျးသညျ။ ဘယျပေါကျကွိုကျလဲ ရှပေ့ေါကျကို အရငျသှငျးပါနျော သူမ ဖွပေေးလိုကျသညျ။ မာတောငျ စေးထနျးနသေော လီးကွီး သူမအဖုတျထဲ မွုပျဝငျသှားပွနျသညျ။
နှဈယောကျ တဈအိပျမကျကို ပုံစံပေါငျးစုံဖွငျ့ ဆှဲကွသညျ။ ထိုအိပျမကျကို ဖကျြဆီးလိုကျသော သူမြားက သူမသငျတနျးတှငျ ရှိသော လကျထောကျဆရာမလေး နှဈဦးဖွဈသညျ့ မိုးယုနှငျ့ ဝတျမှုံတို့ဖွဈသညျ။ ထှနျးထှနျးကံကောငျးသညျလား။ သူမထံတှငျ မြှဝခေံစားရမညျ့ ကံပါလာသညျလားတော့ မပွောတတျ။ ဆရာမ ကိုခြောငျးနတော ကွာပွီ ဟိဟိ သမီးလညျး ပါမယျနျော ဆရာမ သမီးကတော့ ကွညျ့ရုံပဲ စားလို့ မဝသေးခငျ ခှဲစားရသညျကို မကနြေပျသျောလညျး မတတျနိုငျပါ။ မိုးယုကတော့ မပါဟု ပွောသညျ။ ဝတျမှုံကတော့ ပါမညျတဲ့။ မိုးယုကော ဘယျလောကျ ကွာကွာ ခံနိုငျမှာမို့လို့လဲလေ။ ထပျသှငျးပေးဦး ဝတျမှုံက သူမစောကျဖုတျထဲမှ လီးကို ဆှဲထုတျလိုကျသော ထှနျးထှနျးကို အားမလို အားမရ လှမျးပွောသညျ။ သူ့အလှညျ့လေ မွနျမွနျသှငျးလေ ကြျောကြျောက ဖှေးနုလှနျးလှသော အသားအရပေိုငျရှငျ ဖွဈသညျ့ ဝတျမှုံအလှကို ငေးကွညျ့ရငျး ထှနျးထှနျးဖောကျလိုကျစဉျက မိုးပကျြလုမတတျအျောခဲ့ရသော သူမစောကျဖုတျ မို့မို့လေးပျေါ လီးထိပျကို တလေို့ကျရငျး မလိုးရကျသလို ဖွဈသှားမိသညျ။
သှငျးလေ ကြျောကြေျာ့အား ခိုငျနှငျးကို ဆကျသှငျးနသေော ထှနျးထှနျးက ပခုံးပုတျ အသိပေးသညျ။ ဝတျမှုံမှာ ဆရာမနှငျ့ ကြျောကြျောတို့ လိုးနသေညျကို သုံးရကျဆကျတိုကျ ခြောငျးကွညျ့ခဲ့သညျ။ မွငျပွီးသညျ့ နနေ့ောကျပိုငျး ဘယျလိုမှ နလေို့မရတော့။ စောကျပတျတဈခုလုံး ရှနသေညျ။ မိုးယုကို အဖျောချေါတော့ မိုးယုက ကွောကျနသေညျ။ အဆောငျပွနျရောကျလြှငျ ညအိပျရာဝငျပွီးနောကျပိုငျး အမြားအိပျသှားလြှငျ ကိုယျ့အဖုတျကို အသာလေး ညဝတျဘောငျးဘီထဲ လကျသြိုကာ ခိုးပှတျကွညျ့သညျ။ ကြျောကြျောလီးကို မွငျလိုကျ၊ ထှနျးထှနျးလီးကို မွငျလိုကျ ဖွဈနသေညျ။ လီးကွောကွီးမြား ထိုးထိုးထောငျထောငျနှငျ့ ခိုငျနှငျးစောကျဖုတျထဲ မွုပျမွုပျသှားသညျကို မွငျမိပွနျတော့ ကွကျသီးလေးမြားပငျ ထသညျ။ ခိုငျနှငျးအားပါးတရ စုပျပေးနသေညျကို မွငျပွနျတော့ တံတှေးမွိုရ ခကျပွနျသညျ။ ကုတငျဘေးရှိ စမျးလိုကျသောအခါ ဘောလျပငျကို တှသေ့ညျ။ ဘောလျပငျကို ငုံကွညျ့သညျ။ တဈဖကျက ဘောလျပငျငုံ တဈဖကျက အဖုတျကို ပှတျကစားသညျ။ တဈရကျထကျ တဈရကျ စောကျဖုတျက ပိုဆာလာသညျ။ နို့တှေ ပိုတငျးလာသညျ။
နို့သီးကို ခိုးခကြေစားရသဖွငျ့ လကျတှတေောငျ နာသညျ။ သို့သျော အာသာ မပွပေါ။ ထို့ကွောငျ့ အရဲစှနျ့လိုကျသညျ။ တိုကျဆိုငျသညျ့ ထူးခွားမှုတဈခုက ရှိနပေါသေးသညျ။ ယနေ့ ဘာနဆေို့လား မသိ။ ကှနျပြူတာ သငျတနျးပိတျသညျ။ သို့သျော ကြောငျးသားနှဈယောကျတကျမညျ။ ဆရာမသုံးယောကျတကျမညျ။ မိုးယု ငွငျးနသေျောလညျး ဝတျမှုံက အတငျးချေါသညျ။ မိုးယုက အတှငျးခံသုံးထပျလောကျဝတျနသေညျ။ ဘျောလီကွိုးကို ခိုငျအောငျဝတျသညျ။ ဝတျမှုံကတော့ မဝတျခငျြ။ သို့သျော ဟနျအဖွဈ ဝတျသှားသညျ။ အလှပွငျနတော ကွာတော့ မိုးယုကပငျ ငေါကျသေးသညျ။ နငျ မင်ျဂလာပှဲတကျတာ မဟုတျဘူးနျော၊ အဲလောကျ ပွငျမနနေဲ့၊ ဟိုက နငျ့စောကျဖုတျကိုပဲ ဂရုစိုကျမှာ၊ အလိုးခံဖို့ သှားတာမြား မင်ျဂလာပှဲတကျတာ ကနြတောပဲ မင်ျဂလာပှဲလညျး အလိုးခံဖို့ ကွငွောတာပဲ မဟုတျလား မိုးရယျ တျောစမျးပါ နငျတျောတျော ခံခငျြနေ ဟုတျလား နှုတျခမျးနီဆိုးနရေငျး လီးထိပျကွီးကို မွငျယောငျသဖွငျ့ ကွကျသီးပငျ ထသှားသေးသညျ။ ဟိုရောကျတော့ ကြျောကြျောနှငျ့ထှနျးထှနျးက နောကျကနြသေညျ။
ဆရာမကတော့ ဝတျမှုံထမီကို ပငျ့ကာ အပျေါမှ အဖုတျကို ပှတျသညျ။ မိုးယုက တဈနရောတှငျ ရှောငျသညျ့သဘောဖွငျ့ ကှနျပြူတာ တစလုံးဖှငျ့ကာ စာထိုငျရိုကျနလေိုကျသညျ။ မမတောငျ လုပျငနျးစနပွေီ ထှနျးထှနျးက ရောကျမဆိုကျ ပွောသညျ။ ဘေးတှငျ ထိုငျခကြာ အကငြ်္ီကွယျသီးကို ဖွုတျလိုကျပွီး ဘရာကွိုးကို ပခုံးမှ ဆှဲဖွုတျသညျ။ ဆရာမ ကြှနျတျော သူ့ကို အရငျဖိုကျလိုကျမယျ မရဘူးဟကေ့ောငျ ငါလညျး အသဈလေးကိုတော့ အရငျဖိုကျကွညျ့ခငျြသေးတယျ တျောကွစမျး မငျးတို့ ဒါကိုပဲ ငွငျးနကွေမယျဆိုတာ ငါသိတယျ၊ ဒီတော့ ငါဆုံးဖွတျထားသလို မငျးတို့ လိုကျနာရမယျ၊ တဈယောကျက ပါကငျဖောကျမယျ၊ ပါကငျဖောကျဖောကျပွီးခငျြး ပွနျထုတျရမယျ၊ နောကျတဈယောကျက တဈမိနဈဆှဲမယျ၊ ပွီးရငျ ငါးမိနဈစီဆကျဆှဲမယျ၊ သဘောတူရငျ မငျးတို့ထဲက ဘယျသူပါကငျ ဖောကျမလဲ ဒါပဲ၊ လောလောဆယျ ငါစမျးကွညျ့သလောကျတော့ ပါကငျက လုံးဝမဖောကျရသေးတဲ့ အသဈ ကြှနျတျောဖောကျမယျ ကြှနျတျောဖောကျမယျ ကြျောကြျောနှငျ့ထှနျးထှနျးတို့ ဆုံသှားကွသညျ။
တဈယောကျတညျးပဲ ပွောပါ ထှနျးထှနျးနှငျ့ ကြျောကြျော တဈယောကျမကျြနှာ တဈယောကျကွညျ့သညျ။ ကဲ သူ့စောကျဖုတျကို အရငျလကျြသူ ဖောကျရမယျ ကြှနျတျောလကျြမယျ ကြှနျတျောလကျြမယျ ဟှနျး…. ဆရာမက သူတို့နှဈယောကျ မကျြနှာကို စစေ့ကွေ့ညျ့သညျ။ အသဈတှတေ့ော့ အဟောငျးကို မကေု့နျကွပွီပေါ့လေ မဟုတျပါဘူး မဟုတျပါဘူး မမရယျ မဟုတျပါဘူးဗြာ သညျလိုဆိုတော့လညျး အပွိုငျငွငျးကွသညျ။ ရလေ လိုလအေိုတစ်ဆပေေါ့လေ။ ခိုငျနှငျး စိတျထဲ မကမြေနပျ ဖွဈမိသျောလညျး နောကျထပျ အရသာတမြိုးကို မြှျောလငျ့မိသဖွငျ့ ကွိတျဝမျးသာမိသညျ။ သူမက အကွီးမို့ သူမကသာ ဆုံးဖွတျပေးရတော့မညျ။ ထှနျးထှနျးက နောကျမှ ရောကျလာတဲ့သူဆိုတော့ ထှနျးထှနျးဖောကျလိုကျ၊ ဖောကျဖောကျပွီးခငျြး ပွနျထုတျရမှာနျော၊ လကျြတာကတော့ နှဈယောကျလုံး လကျြကွ အဝတျကိုဆှဲခြှတျလိုကျကွပွီးနောကျ ကိုယျလုံးတီးဖွဈသှားတော့ တမြိုးခံစားရသညျ။ ယောကျြားနှဈယောကျ၏ တဈဖကျစီမှ ကွမျးရှသော အနမျးမြားနှငျ့ အကိုငျအတှယျမြားကွောငျ့ ဝတျမှုံမှာ ကော့နသေညျ။
ပေါငျကွောနှငျ့ စောကျဖုတျကို ပှတျရငျး နို့ကို စုပျကွတော့ သူမ မူးမိုကျမတတျ ခံစားရသညျ။ စောကျဖုတျကို တဈလှညျ့စီလကျြတော့ သူမမှာ ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖွဈနမေိသညျ။ လကျမြား ငွိမျငွိမျထား၍ ရသျောလညျး ခွကေို ငွိမျငွိမျထားမရ။ လှုပျရမျးနသေညျ။ ဝတျမှုံမှာ အလကျြခံရတုနျးကတော့ ကောငျးပွီး စုပျပေးရမညျဆိုတော့ တှနျ့သှားသညျ။ သူမဘယျဖကျတှငျ တခြောငျး ညာဘကျတှငျ တခြောငျးကိုငျထားသော လီးကို ကှငျးသာ ထုပေးနမေိသညျ။ ခုထိ မစုပျရဲသေး။ မွနျမွနျစုပျလေ ထှနျးထှနျးကတော့ ထုံးစံအတိုငျးပငျ ခပျမွနျမွနျ ဖွဈနသေညျ။ သူမလညျး မထူးတော့ပွီ။ စောငျ့နလြှေငျ ကွာရုံသာ ရှိမညျမှနျးသိသဖွငျ့ ခြောငျးကွညျ့ဖူးသညျ့ အကွိမျတိုငျး ဆရာမစုပျပေးနကေလြို အာခေါငျထိငုံခလြိုကျသညျ။ စုပျမယျ့ စုပျတော့လညျး ဆရာမကွီး အထာနဲ့ပါလား၊ အသဈသာဆိုတယျ ကြှမျးသလိုလိုပဲ သူမက ကွားသျောလညျး မကွားဟနျပွုကာ ထှနျးထှနျးလီးစုပျပွီး ကြျောကြျောလီးကို စုပျလိုကျသညျ။ ၁၂ နာရီကြျောနပွေီ၊ ငါဗိုကျဆာပွီ ခံလို့ဖွငျ့ အားမရသေးခြိနျတှငျ အဖကျြမလေး မိုးယုက ဝငျလာသညျ။
ဟုတျတော့ ဟုတျပါသညျ။ မနကျ ၈ နာရီကတညျးက သူတို့ လိုးနကွေသညျ။ ပထမခြီဘယျခြိနျပွီးလိုကျမှနျး မသိ။ အပြိုစငျဘဝလညျး ဘယျလို ကုနျသှားမှနျး မသိပါ။ ကြျောကြျောနှငျ့ ထှနျးထှနျးလညျး ဆေးစားထားသညျ ဟုဆိုသညျ။ သူမမှာလညျး ခံနညျးတှေ နညျးနညျး သိသှားသညျ။ ဆရာမကလညျး သငျပေးသညျ။ ဖငျကို တောငျးလိုးကသြျောလညျး ဝတျမှုံက နောကျတဈပတျလောကျ စောငျ့ခိုငျးသညျ။ မိုးယုလာချေါခြိနျမှာ ထှနျးထှနျးက သူမကို လေးဘကျထောကျခိုငျးပွီး နောကျမှ လိုးနခွေငျး ဖွဈသညျ။ သူမမှာ မနကျကတညျးက ခံနရေသောကွောငျ့ လေးဘကျမထောကျနိုငျတော့ဘဲ ရှကေို့ ငိုကျစိုကျကနြသေညျ။ ကြျောကြျောက တစောငျးလိုကျ ခိုငျနှငျးဖငျကို ဆျောနသေညျ။ ပွီးတော့မယျ ခဏ ထှနျးထှနျးက ပွောသညျ။ မိုးယုလညျး အောငျ့သာ နနေသေညျ။ လိုးသံတှကေ ဆူညံနသေညျမို့ စိတျက ခပျပါပါ ဖွဈနသေညျ။ သို့သျော ကောငျးကောငျးပငျ မညညျးနိုငျတော့သော ဝတျမှုံကို ကွညျ့ကာလညျး လနျ့မိသညျ။ကှနျပြူတာ သငျတနျးခနျးမတဈခုလုံးကို ပုံစံပွောငျး၍ ခနျးမတှငျ အတှငျးခံဘောငျးဘီသာ ဝတျထားကွသော။
ဆကျနောငျ၏ဘေးတှငျ ဘသကျ၊ ခဈြမောငျ၊ ရဲလှငျနှငျ့ စိုးအောငျတို့ တဈဘကျနှဈယောကျစီ ဆိုဖာဆကျတီခုံတှငျ ထိုငျနကွေသညျ။ ဘေးတှငျ မိသားစုအိပျ ဆိုဖာကုတငျကွီးတဈလုံး ရှိသညျ။ စားပှဲခုံနှဈခုံ ရှိသညျ။ စားပှဲ တဈလုံးပျေါတှငျ လိုးဖို့အသုံးပွု၍ ရသညျ့ ကွိုးမြား၊ လညျပတျမြား၊ လီးတုမြားနှငျ့ စုံစိစှာ ရှိနသေညျ။ ဗှီဒီယိုကငျမရာ ဒေါကျတိုငျတဈခုမှ ဗှီဒီယိုကငျမရာက ရကော့ မီးနီလေး ပွနသေညျ။ တိုကျရိုကျပွသော ကှနျပြူတာ တဈလုံးရှိသညျ။ ဘေးတှငျ အသံတိုးတိုးဖွငျ့ အင်ျဂလိပျကားနှငျ့ အာရှကားမြား ပွနသေော ကှနျပြူတာ နှဈလုံးရှိသညျ။ ဒျေါခိုငျနှငျး ကွှပါခငျဗြာ ဒေါငျ့တဈနရောတှငျ အလှပွငျပစ်စညျးမြား၊ အဝတျအစားမြားထားသညျ့ အခနျးကို လိုကျကာဖွငျ့ ဖှဲ့ထားပေးသညျ။ ထိုထဲတှငျ ခိုငျနှငျး၊ ဝတျမှုံနှငျ့ မိုးယုတို့ရှိသညျ။ ထိုထဲမှ ခိုငျနှငျး ထှကျလာသညျ။ ခိုငျနှငျးသညျ မွနျမာ့ရိုးရာ ပှဲတကျ ဝတျစုံလေး ဝတျထားသညျ။ ခငျးထားသော ကျောဇောအတိုငျး လမျးလြှောကျလာသညျ။ အပွာရငျ့ရငျ့ ဝတျစုံနှငျ့ ဆံပငျမြားကို ထုံးနှောငျထားသညျ။ မဟာနဖူးမှာ ထငျးနသေလို ရငျမှာလညျး တငျးနသေညျ။
ကိုယျကို တဈပတျလှညျ့ပွသောအခါ တငျမှာလညျး လုံးကဈြနသေညျ။ သူတို့ငါးယောကျက ဝိုငျးဖှဲ့၍ စားမတတျ ကွညျ့နမေိသညျ။ ခိုငျနှငျးမှာ ယောကျြားမြားကို စိတျကွိုကျကစားခဲ့သမြှ ယခုတော့ ဝဋျလညျလပွေီ။ သူမ တဈကိုယျလုံး ပေါငျးတငျရငျး ဝတျမှုံနှငျ့ မိုးယုကို ခြော့ရသညျ။ အလှပွငျသညျ။ ဝတျစုံမြား ဝယျသညျ။ အားဆေးမြား ဝယျကာ ကြှေးသညျ။ ပွနျရောကျတော့ အခနျးက ပုံစံပွောငျးနသေညျ။ စားပှဲပျေါတှငျ လီးတုမြား၊ ပါးစပျပိတျဘုလုံးမြား၊ ကွိုးမြား၊ လညျပတျမြားစသညျ့ ဆကျစပျပစ်စညျးမြားကို တှရေ့တော့ ကွကျသီးနညျးနညျး ထမိသညျ။ ခိုငျနှငျးသညျ ခိုငျးသညျ့ အတိုငျး တဝမေသိမျး လိုကျနာရသညျ။ သူမဆီးစပျတှငျ လိပျပွာရုပျ စတကော ကပျသညျ။ မိုးယုတှငျ နှငျးဆီရုပျ စတကော ကပျသညျ။ ဝတျမှုံတှငျ အသညျးကှဲရုပျ စတကော ကပျသညျ။ ခဏ ခဏငိုကွသော ဝတျမှုံနှငျ့ မိုးယုကိုလညျး ခြော့ရသညျ။ ခိုငျနှငျးသညျ မွနျမာ့ရိုးရာ ဝတျစုံဖွငျ့ ဝတျကာ သကောငျ့သားမြားကို အပွငျပနျး အလှပွသညျ။ ကွညျ့ရသညျမှာ သူမ မကျြနှာတှငျ ပွုပွငျမှမျးမံရသော အလှအပမြားကို မွငျဟနျမပျေါကွပါ။
အဖွူရောငျ အတှငျးခံမြားသာ ဝတျထားကွသော ဆကျနောငျတို့ ငါးယောကျသညျ သူမတငျဆီကိုသာ အာရုံရောကျနကွေသညျ။ ဝတျမှုံကွှပါ ဝတျမှုံကလညျး မွနျမာ့ရိုးရာ ဝတျစုံအနီအစငျးလေး ဝတျလာသညျ။ အထငျတှငျ အမညျးရောငျလေး ဖွဈနသေညျ။ သူမလညျး ဆံပငျကို နောကျသို့ စီးထားသညျ။ မဟာနဖူးပွငျကို ရငျနှငျ့ တငျနဲ့ လိုကျဖကျအောငျ ပွောငျနအေောငျ ထားသညျ။ ဖွညျးဖွညျးခငျြး လြှောကျပွီး ကိုယျကိုလှညျ့ပွသညျ။ သူတို့ ဘယျလောကျ လိုးနိုငျမှာလဲ၊ သူတို့ ငါးယောကျ လီးငါးခြောငျးပဲပါတယျ၊ ဘယျသူမှ လီးနှဈခြောငျး မပါဘူး၊ ငါတို့ သုံးယောကျကို တဈရကျတညျး အခြီ နှဈဆယျသူတို့ မဆှဲနိုငျပါဘူး၊ ဆှဲနိုငျလညျး မိနျးကလေးက အနိုငျခညျြးပါ၊ စဈသား နှဈရာကို မိနျးမတဈယောကျနဲ့ ထိနျးတဲ့ ပုံပွငျတှေ သိတယျ မဟုတျလား တငျကို ပဈပွီး လြှောကျလမျးဘေးတှငျ ရပျနလေိုကျတော့ ဆကျနောငျ၏ မိုးယုကို ချေါသံကွားရသညျ။ မိုးယုက ကွကျသှေးရောငျ ဝမျးဆကျလေး ဝတျလာသညျ။ ထမီစှနျးနဲ့ အကငြ်္ီစှနျးတှငျ ပနျးပှငျ့လေးပါသညျ။ နဖူးကို ပျေါအောငျ ဆံပငျမြားကို သပျတငျကာ ဆံညှပျဖွငျ့ ညှပျထားပွီး ဆံနှယျမြားကို ဘေးနှဈဖကျသို့ ခထြားသညျ။
သူမလညျး တငျကို ပွကာ ရပျနလေိုကျသညျ။ နညျးနညျးလေး ကုနျးကွပါ ခိုငျနှငျးက ခါးလေးနညျးနညျးကိုငျးကာ ကုနျးပေးသညျ။ မိုးယုနှငျ့ ဝတျမှုံလညျး ခိုငျနှငျးလုပျသဖွငျ့ လိုကျလုပျသညျ။ ရပွီ ပွနျမတျလိုကျပွီး တဈပတျလှညျ့ပွ၊ ပွီးရငျ သှားတော့ ဆကျနောငျတို့ ကိုယျ့ဟာကိုယျ ဆုပျကိုငျထားရငျး တီးတိုး သဖနျးပိုး ထိုးကွသညျ။ ဘသကျအသံက ပိုကယျြသညျ။ အိုးတှကေတော့ စဈကိုငျးအိုးတှခေညျြးပဲ၊ အိုးစိမျးကတော့ ပိုအယျတယျ ဒီကောငျ ကှငျးတောငျ ထုနပွေီ ဟဟ အနီးရှိ ခဈြမောငျက လှမျးပွောသဖွငျ့ ဘသကျက သူ့ဟာကို အတှငျးခံထဲ မရမက ပွနျသိပျထညျ့သညျ။ ဆကျနောငျ အသံက လိုကျကာ တဈဖကျရှိ အလိုးတျောခံရနျစောငျ့နသေော မမသုံးယောကျထံသို့ ရောကျလာသညျ။ မမသုံးယောကျက တဈယောကျမကျြနှာ တဈယောကျကွညျ့လိုကျကွသညျ။ စောဒက တကျခှငျ့မရှိသညျ့ အခွအေနေ။ မိုးယု ထှကျလာခဲ့ပါ၊ တဈယကျေတညျးပေါ့ သဈသီးတို့တှငျ မှညျ့သညျ့အသီးက စားကောငျးသျောလညျး မိနျးကလေးတို့တှငျ စိမျးသညျ့အသီးက ပိုကောငျးသညျ မဟုတျပါလား။
မိုးယုတဈယောကျ ခွလေကျမြား နညျးနညျးအေးစကျနသေညျ။ လြှောကျ၍သာ သှားလိုကျရသညျ။ ဘယျကနေ ဘယျလို ရောကျသှားသညျ မသိ။ ကိုယျ့ဘေးနားလေး လာထိုငျပွီး ဟိုကားထဲမွငျနရေသလိုလေး ကိုယျ့ဟာကို မှုတျပေးပါဦး မိုးယုသညျ တံတှေးသီးသှားသညျ။ အမိနျ့ကိုလညျး လှနျဆနျလို့ မဖွဈနိုငျတော့။ ဆကျနောငျ ဘေးတှငျ ထိုငျကာ ဆကျနောငျ၏ အတှငျးခံကို ခြှတျလိုကျသညျ။ ရဲလှငျက သူမနို့ကို လာစမျးသညျ။ စိုးအောငျက သူမခွသေလုံးကို ပှတျသညျ။ ဆကျနောငျလီးကွီးသညျ ဖီးစိမျးငှကျပြောသီးလီးကို ကောကျနသေညျ။ အကွောမြား ပွိနျးပွိနျးထနသေညျ။ လီးလုံးကို ကိုငျကာ လြှာဖြားဖွငျ့ လီးထိပျကို ဝိုငျးပေးလိုကျသညျ။ ဝူး ကြှမျးသားပဲ ဘေးမှ ကွညျ့နသေော ဘသကျက ပွောသညျ။ နောကျမှ အကငြ်္ီကို ခြှတျနကွေသညျ။ သူမ ရှကေို့သာ မဲလကျြပေးနလေိုကျသညျ။ စိုးအောငျထငျပါသညျ။ သူမတငျတဈခွမျးကို ဖှဖှကိုကျသညျ။ ဘသကျနဲ့ ခဈြမောငျလညျး ထလာသညျ။ သူမ ဒဲ့နကော လီးကို စုပျပေးလိုကျသညျ။ ဆကျနောငျက လီးကို ကိုငျပွီး ပငျ့ထားသဖွငျ့ ဂှေးစမြေ့ားကို တဈလုံးစီငုံသညျ။
ငုံးဥပွုတျပူပူလေး မိုးယု၏ လကျနှဈဖကျကို တဈယောကျယောကျက နောကျသို့ ဆှဲသိမျးထားသဖွငျ့ လီးကို မကိုငျရဘဲ စုပျပေးရသညျ။ လီးကွောကွီးကို လကျြသညျ။ လပွှတျကို တဈလုံးစီငုံခိုငျးသဖွငျ့ ငုံသညျ။ နို့ကို တဈယောကျတဈလုံးကိုငျကာ နုအိနတောပဲ အယျခကျြကတော့ ကနျးကုနျ တငျးတယျနျော နို့သီးကိုငျကွညျ့ တျောတျောမာတယျ စသဖွငျ့ ပွောနကွေသညျ။ နောကျမှ တငျကို ဖွဲပွီး စောကျဖုတျကို ကစားနကွေသူကလညျး ခုနက အလိုးခံထားရပမေယျ့ စောကျဖုတျကတော့ လနျးလနျးလေးပဲ ဟကေ့ောငျရေ စောကျစကေ့ ရဲတှတျနတောနျော ဟေ့ စောကျစကေို့ ငါကလိမယျ ငါ လကျြမယျကှာ၊ လကျြခငျြစရာလေး တငျကို ငါဖွဲထားပေးမယျ ငနျတယျကှ ထှီ ဟုတျလောကျပါဘူးကှာ ငါလကျြကွညျ့မယျ အလကားပွောတာ ငါဆကျလကျြမယျ တဈယောကျတဈပေါကျနှငျ့ လုပျနကွေသညျ။ မိုးယုသညျ ဆကျနောငျကို ခှလိုကျသညျ။ သခြောကွညျ့ကွရအောငျ ဟုဆိုကာ ကနျြလေးယောကျက အောကျကို ငုံ့ကွညျ့ကွသညျ။ မိုးယုက မာထနျနသေော ဆကျနောငျလီးကို ကိုငျလိုကျပွီး စောကျပတျအကျကွောငျးတှငျ တလေို့ကျသညျ။
စောကျပေါကျကဉျြးကဉျြးနဲ့ လီးကွီးကွီးဇာတျလမျး စပါပွီခငျဗြာ တဈယောကျက ပွောသညျ။ ကိုယျတိုငျသှငျးမယျ့ ဇာတျလမျးခငျဗြ တဈယောကျက ပွောပွနျသညျ။ ကာမစိတျကွှဆေးသောကျထား၍သာ မိုးယုတဈယောကျ မှနျနခွေငျး ဖွဈသညျ။ သို့မဟုတျကတော့ မလှယျပါ။ လီးထိပျကို စောကျပတျအကျကွောငျးတှငျ ရှနေ့ောကျမှပွေီး ထိုငျခလြိုကျသညျ။ ခုနက သူမအလိုမတူဘဲ ဆောငျ့လိုးခဲ့စဉျက ဘာမှနျးမသိခဲ့သျောလညျး ခုတော့ နာသညျ။ သို့သျော သူမအားစိုကျကာ ဆောငျ့ထိုငျခသြညျ။ လီးလုံးကွီးမှာ သူမအဖုတျထဲ တဖွညျးဖွညျး မွုပျဝငျနသေညျ။ အ.. တဈဝကျလောကျရောကျတော့ သူမခဏ ပွနျထုတျသညျ။ သို့သျော ဆေးအစှမျးကွောငျ့ စိတျက ကွှနသေညျ။ ပွနျဆောငျ့ခသြညျ။ အိုး……. ဆုံးအောငျ မွုပျဝငျသှားတော့ ဆကျနောငျက အျောသညျ။ မိုးယုက ရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျပေးသညျ။ ဆကျနောငျသညျ မိုးယု၏ တငျကိုဆုတျကိုငျကာ အသာလေး ဆကျလုပျခိုငျးသညျ။ မကျြလုံးမှိတျကာ အပွညျ့ခံစားသညျ။ မိုးယုက ဆကျလကျ၍ ဆောငျ့ခသြညျ။ တပှကျပှကျမွညျနသေညျ။ ကနျြလေးယောကျမှာ အံ့အားသငျ့နသေညျ။
ဆကျနောငျက မိုးယုတငျလုံးကို ကဈြကဈြပါအောငျဆုတျကာ သူကလညျး ဆောငျ့တကျသညျ။ အားလုံးပိုဆာလာကွသညျ။ ဘသကျ ပွငျထား ဘသကျက ဘေးတှငျ ပကျလကျလေးဖွဈအောငျနကော လီးကို ထောငျနအေောငျ ကိုငျထားသညျ။ ကဲ သူ့ပျေါတကျ ဆကျနောငျက မိုးယုတငျလေးကို ပုတျလိုကျပွီး ပွောငျးခိုငျးသညျ။ မိုးယုက ဘသကျပျေါတကျဆောငျ့သညျ။ အိုး .. အား အိုး… ဘသကျလကျကို နောကျသို့ခြိတျကာ မိုးယုရှတေို့းနောကျဆုတျလုပျသညျကို ငွိမျခံသညျ။ မိုးယု ဆောငျ့ခပြွီ။ တပှကျပှကျနဲ့ မွညျသညျ။ မိုးယုနို့အုံလေး အထကျအောကျလှုပျခါနသေညျ။ ဆံပငျမြားလညျး ဝဲလှငျ့နသေညျ။ ဘသကျက မိုးယုနို့ကို လှမျးကိုငျသညျ။ ခဏကွာတော့ မိုးယုမှ ကနျြသုံးယောကျဆီသို့ တကျကာ ဆောငျ့ရသညျ။ ခြှေးမြားပငျ စို့နသေညျ။ မငျးက ဒီနားမှာပဲ အနားယူလိုကျဦး၊ ဟကေ့ောငျတှေ ပါးကို ဝအောငျနမျး၊ နို့ကို ဝနအေောငျ ကိုငျကွပေါ့၊ ကဲ အခနျးထဲက ဝတျမှုံကွှပါ ဝတျမှုံတဈယောကျ ကွောကျကွောကျနဲ့ ထှကျလာသညျ။ သူမတဈကိုယျလုံး ရှိနျးဖိနျးနသေညျ။
ကိုယျကို တဈပတျလှညျ့ပွပါဦး ဝတျမှုံသညျ ဘေးသို့ တဈခကျြစောငျးငဲ့ကွညျ့တော့ မိုးယုကို ရဲလှငျနှငျ့စိုးအောငျက အငမျးမရ နမျးနကွေသညျ။ နို့ကိုလညျး ပငျ့ခကြေိုငျထားကွသညျ။ ဝတျမှုံသညျကိုယျကို တဈပတျလှညျ့လိုကျသညျ။ ကြောကိုပွပွီး အကငြ်္ီကို ခြှတျခသြညျ။ ထမီကို ခြှတျခသြညျ။ ဘျောလီနဲ့ စပငျဒါကိုလညျး တဈပါတညျး ခြှတျလိုကျသညျ။ နောကျ ကိုယျ့အဖုတျကို ကိုယျအုပျထားကာ ပွနျလှညျ့ပေးသညျ။ မောငျတျောတို့ လီးနဲ့ မတှရေ့သေးတဲ့ မငျးရဲ့ အဖုတျကို ကုနျးပွီး ဖွဲပွပေးပါဦးလား သခငျမဖုရား ဆကျနောငျက သရျောသလိုလို ပွောသဖွငျ့ ဝတျမှုံက လှညျ့ကုနျးကာ တငျကို ဖွဲပွရသေးသညျ။ လနျးတျောမူတယျ မဟုတျလား မောငျမငျးတို့ ဆကျနောငျက ရယျကာ ပွောသညျ။ မငျးရဲ့ အဖုတျကနေ တဈဆငျ့ မငျးရဲ့ သားအိမျကို ထိုးမှပွေီး မငျးကို နတျပွညျပို့ပေးမယျ့ ဟောဒီမောငျရဲ့ လီးကို စုပျတျောမူပေးပါဦး သခငျမဖုရား ဝတျမှုံသညျ ဘသကျနှငျ့ ခဈြမောငျလီးကို တဈဖကျစီကိုငျကာ ဆကျနောငျ၏ လီးကို စုပျပေးသညျ။ ခဏသာ စုပျခှငျ့ပေးသညျ။ နောကျလှညျ့၍ ဆောငျ့ခပြေးရသညျ။
ဝတျမှုံလညျး တဈယောကျစီ နောကျလှညျပွီး ဆောငျ့ခပြေးရသညျ။ ပွီးနောကျ ဘသကျနှငျ့ ခဈြမောငျ၏ အနမျးမြားအောကျ ခဏနားသညျ။ နှုတျခမျးမြားကို စုပျသညျ။ နို့မြားကို ကိုငျသညျ။ ဆကျနောငျက ခိုငျနှငျးကို ချေါသညျ။ ခိုငျနှငျးရောကျလာပွီး ဆကျနောငျ လီးကို စုပျသညျ။ ပွီးလြှငျ ပေါငျတဈဖကျခှပွီး ထိုငျကာ ဆောငျ့ခပြေးသညျ။ တဈယောကျပွီး တဈယောကျပျေါ ဆောငျ့ခရြသညျ။ ကုတငျပျေါသို့ မခြောသုံးယောကျ ပကျလကျကလေး အိပျသညျ။ စိုးအောငျ၊ ဘသကျနှငျ့ ရဲလှငျက စောကျပတျ အသီးသီးသို့ သူတို့လီးကို ခြိနျလိုကျသညျ။ တပွိုငျနကျ ဆောငျ့ခသြညျ။ နောကျ ပွိုငျတူဆှဲသညျ။ ခိုငျနှငျးက သိပျမအျောသျောလညျး မိုးယုနှငျ့ ဝတျမှုံကတော့ အျောကွသညျ။ သို့သျော ကောငျးကောငျးတော့ အျောလို့မရ။ ဆကျနောငျနှငျ့ ခဈြမောငျက သူတို့ပါးစပျထဲ လီးကို သိပျထညျ့ထားကွသညျ။ ဇာတျသိမျးတော့ ခိုငျနှငျးကို လကျနောကျပဈထား ဒူးထောကျကာ နခေိုငျးသညျ။ မကျြနှာမော့ပွီး ပါးစပျဟထားသညျ။ ဘသကျက ခပျသှကျသှကျ ကှငျးထုခသြညျ။ တဈယောကျပွီးတဈယောကျ ကှငျးထုခသြညျ။
ခိုငျနှငျး ထှေးထုတျသမြှ ရငျဘတျပျေါတှငျ ပကြေံနသေညျ။ မကျြခုံးမှေးပျေါ ပါးပျေါ နှာတံပျေါတှငျလညျး လီးရညျမြား ပကြေံနသေညျ။ ထပျသှငျးပေးဦး ခိုငျနှငျးတဈယကျေ ထိုကဲ့သို့ မပွောနိုငျ။ ကွီးမားတုတျခိုငျလှသော ဘသကျလီးပျေါ သူမစောကျဖုတျ သိပျထညျ့ထားရသညျ။ ဘသကျက ခေါငျးအုံးလေးပျေါ အုံးကာ ပကျလကျလေး ကွမျးပျေါ အိပျနသေညျ။ သူမ ဖငျပေါကျထဲသို့ ရဲလှငျ၏ ရှညျရှညျမဲမဲနှငျ့ အကွောပွိုငျးပွိုငျးထကာ ကွောကျစရာကောငျးသော လီးက မွုပျဝငျကာ ခြီးအိမျထိအောငျ တဒုတျဒုတျဆောငျ့နသေညျ။ ခဈြမောငျနှငျ့စိုးအောငျက ဒူးထောကျကာ သူမကိုယျကို တဈစောငျးဆှဲပွီးလြှငျ ပါးစပျထဲသို့ တဈယောကျတဈလှညျ့စီ ထညျ့ကွသညျ။ အောကျမှ ဆောငျ့တကျလိုကျ၊ နောကျမှ ဖိလိုးလိုကျကွားမှ ခဈြမောငျက သူမမေးစကေို့ဆှဲကာ လီးကို အာခေါငျစိုကျအောငျ သှငျးပွီး ခေါငျးကို ဘယျညာယမျးသညျ။ စိုးအောငျက နို့ကိုဆှဲသညျ။ ရဲလှငျက လီးကို အပွငျထုတျလိုကျသညျ။ ဖောကျခနဲ မွညျသှားသော အသံနှငျ့အတူ ခိုငျနှငျး၏ ဖငျပေါကျမှာ ဟောငျးလောငျးကနျြနခေဲ့သညျ။ ရဲလှငျတံတှေးတဈခကျြ ထှေးထညျ့သညျ။
စိ စိ.. ရဲလှငျက သူ့လီးခေါငျးကို သိပျထညျ့ကာ ထိုးထညျ့တော့ တံတှေးမြားဖွငျ့ တစိစိမွညျနသေညျ။ ခိုငျနှငျးသညျ နာသညျဟု မညညျးအား။ စိုးအောငျလီးကို တဈလှညျ့ငုံကာ ခဈြမောငျလီးကို ကှငျးထုပေးရသညျ။ စိုးအောငျက နောကျစမှေ့ ဆံပငျမြားကို ပငျ့ကိုငျကာ ပါးစပျကို လိုးနသေညျ။ အောကျကလညျး ဆောငျ့တကျသညျ။ ရဲလှငျကလညျး ဖငျကို ဆောငျ့လိုးရာ တငျလုံးမှာ တုနျတုနျတကျသှားသညျ။ ပါးစပျကလညျး ဟထားရသဖွငျ့ နောကျကဆောငျ့လိုကျတိုငျး ရှကေ့လီးကို အဆုံးငုံပွီးသားလို ဖွဈကာ ပါးစပျဖွငျ့ ခံပေးသလို ဖွဈနသေညျ။ ဖငျကို ငါဆျောဦးမယျ ဟုဆိုကာ စိုးအောငျက နောကျသို့ ယှနျးရာ ရဲလှငျက တဈခကျြခပျပွငျးပွငျးဆောငျ့ပွီး ထုတျပေးသညျ။ ရှကေို့လှမျးကာ ပါးစပျထဲသိပျထညျ့ဖို့ ပွငျသညျ။ ဝတျမှုံနှငျ့ မိုးယုတို့မှာ လကျကို အပျေါသို့မွောကျကာ ကွိုးဖွငျ့ အခညျြခံထားရသညျ။ လကျတဈဖကျနှငျ့ တဈဖကျ မနီး။ ပါးစပျကို ဘုလုံးဖွငျ့ ပိတျထားသညျ။ အဝတျအစား အပွညျ့အစုံ ပါသညျ့အပွငျ ဘျောလီလညျး အကွပျ၊ အတှငျးခံလညျး နှဈအထပျထပျ ဝတျထားပေးသညျ။
ထို့အပွငျ ခွနှေဈဖကျကွားတှငျ တဈဖကျနဲ့ တဈဖကျ မနီးအောငျ ခေါငျးအုံးညှပျထားပေးသညျ။ ခွဖေဝါးက ကွမျးပွငျကို မထိတထိဖွဈနသေညျ။ ဆကျနောငျက ကွိမျလုံးဖွငျ့ တငျလုံးကို ခပျဆတျဆတျရိုကျသညျ။ ဖွနျး…… အုဝု မိုးယုတဈယောကျ မခံမရပျနိုငျအောငျ ဖွဈနသေညျ။ စောကျရညျမြား ထှကျနသေညျ။ ဆကျနောငျက ဝတျမှုံကို ရိုကျပွနျသညျ။ ဖွနျး…….. အု………. ဖုတျ ဖုတျ ဝု ဝု ဆကျနောငျက မိုးယုနှငျ့ ဝတျမှုံတို့ရဲ့ တငျကို ဖုတျခနဲပုတျပွီး ကုတျလိုကျသညျ။ မွငျကှငျးထဲတှငျ ခိုငျနှငျးကို ယောကျြားလေးယောကျက ပကျပကျစကျစကျ ဝိုငျးလိုးနကွေသညျ။ သို့သျောသူမတို့ကလညျး ခံခငျြလောကျအောငျ ဖီးလျကတကျနသေညျ။ သို့သျော ဘယျလိုမှ လုပျမရ။ ရိုကျလိုကျ ကုတျလိုကျလုပျတော့ ရုနျးကွသညျ။ သညျအခြိနျမှာ ဘယျလိုလီးလာလာ၊ ဘာပဲ လုပျပေးရ လုပျပေးရ၊ ဘယျလိုပဲ လုပျလုပျ၊ ဘယျနှဈယောကျပဲလိုးလိုး ခံပေးခငျြနခြေိနျ ဖွဈသညျ။ ခိုငျနှငျးက ဒူးထောကျကာ မှောကျပေးသညျ။ ရဲလှငျနှငျ့ ခဈြမောငျက ဖငျကို တဈခကျြစီသှငျးသညျ။ ခိုငျနှငျးကို မော့ခိုငျးသညျ။ ခိုငျနှငျး၊ ဝတျမှုံနှငျ့ မိုးယုတို့ အကွညျ့ခငျြးဆုံထားသညျ။
ရဲလှငျက နောကျမှ ဒူးတဈဖကျထောကျကာ ခိုငျနှငျးဖငျကို လိုးသညျ။ နာသဖွငျ့ ခိုငျနှငျး ရှုံ့မဲ့နသေညျ။ ရဲလှငျက ဖငျထဲကထုတျပွီး စောကျဖုတျကိုတဈလှညျ့လိုးသညျ။ ကနျြသုံးယောကျက နောကျမှ ရပျကာ ကှငျးထုနကွေသညျ။ ရဲလှငျနားတော့ ခဈြမောငျဝငျသညျ။ ခပျကွမျးကွမျး သှငျးလိုကျသဖွငျ့ ခိုငျနှငျးအျောညညျးသညျ။ ခဈြမောငျက ခပျသှကျသှကျလိုးသညျ။ တဗှကျဗှကျမွညျနသေညျ။ ခဈြမောငျလညျး ဖငျလိုးလို့ အားရတော့ စောကျဖုတျကို သှငျးသညျ။ စောကျဖုတျကိုလိုးပွီး နားသညျ။ ဘသကျအလှညျ့ရောကျလာသညျ။ ဘသကျက ပှငျ့နသေော ခိုငျနှငျးဖငျပေါကျကို တံတှေးထှေးထညျ့သညျ။ လီးကို တံတှေးဆှတျသညျ။ လီးခေါငျးအရငျသိပျထညျ့လိုကျပွီး ခါးစောငျးကိုငျကာ ဆောငျ့ဆောငျ့လိုးသညျ။ ခိုငျနှငျးမှာ ခေါငျးမြားပငျ စိုကျကနြသေညျ။ ဆကျနောငျက မော့နဖေို့ ပွောသညျ။ ဘသကျက ဆကျလိုးသညျ။ တဒုတျဒုတျနဲ့ မွညျနသေညျ။ ဘသကျက ဖငျသကျသကျလိုးပွီး နားသညျ။ စိုးအောငျ ဝငျဆှဲပွနျသညျ။ ခိုငျနှငျးက ပါးစပျကို မပှငျ့တပှငျ့ဟထားကာ ဒူးထောကျ၍ မော့ပေးသညျ။ စိုးအောငျက ဘေးမှနေ၍ မကျြနှာပျေါ ကှငျးထုခသြညျ။
တဗှကျဗှကျနဲ့ ထုနသေျောလညျး လီးရညျက မထှကျသဖွငျ့ ခိုငျနှငျးလညျး မောမောနှငျ့ စုပျပေးလိုကျသညျ။ ထှကျခါနီးတော့ ခိုငျနှငျးမကျြနှာကို နညျးနညျး ဆုတျပေးသညျ။ လီးရညျက နှုတျခမျးတဈဝိုကျနှငျ့ အထကျ ပါးပွငျပျေါသို့ တဗဈြဗဈြပနျးထှကျသညျ။ အရှိနျပါသဖွငျ့ နားထငျဆံစထိ စိုကုနျသညျ။ လီးရညျလညျး မြားသညျ။ ပါးပွငျတဈခုလုံး ဖှေးသှားသညျ။ ရဲလှငျက ခိုငျနှငျးမကျြနှာတညျ့တညျ့ ကှငျးထုသညျ။ သူမပါးပွငျတှငျ စိုးအောငျလီးရညျမြား ရှဲနဈကာ အမြားအပွားစီးကနြသေညျ။ ရဲလှငျလီးရညျတှလေညျး တဗဈြဗဈြထှကျသညျ။ မေးစမှေ့ နဖူးထိ တနျးခနဲ တနျးခနဲ ကသြညျ။ ကုနျခါနီးတော့ နှုတျခမျးပျေါ ပိုကသြညျ။ သူမမထှေး မမွိုဘဲ အတိုငျးထားသညျ။ ဘသကျက ဆကျ၍ မကျြနှာပျေါ ကှငျးထုခသြညျ။ ခေါငျးကို သခြောကိုငျကာ လှတျနသေော ပါးပွငျတဈဖကျပျေါသို့ လီးထိပျနဲ့ ထောကျကာ ကှငျးထုခသြညျ။ လီးရညျမြား ပါးပွငျပျေါ ပုံကာ ကသြညျ။ ရှဲနဈကာ အောကျနို့ပျေါထိ စီးကသြညျ။ ခဈြမောငျက ခပျလှမျးလှမျးကနသော ကှငျးထုခသြညျ။ ခပျလှမျးလှမျးဆိုသျောလညျး မကျြနှာနှငျ့ ငါးလကျမလောကျ အကှာကသာ ဖွဈသညျ။
သူမငွိမျငွိမျမော့နသေျောလညျး ပထမတဈခကျြ နှာခေါငျး၊ ဒုတိယတဈခကျြ နားရှကျ တတိယတဈခကျြ နားထငျနှငျ့ လညျပငျးမြားသို့ကကြုနျသညျ။ ပါးစပျထဲ ဝငျတာတှေ ထှေးလိုကျ ဒီတိုငျးကိုယျ့ပါးစပျပျေါ ကိုယျပွနျထှေး ခိုငျနှငျးက ပူစီပေါငျးမြားထနသေော လီးရညျကို ထှေးထုတျသညျ။ လီးရညျမြားက နားရှကျတှငျလညျး တှဲကနြသေညျ။ နို့ပျေါသို့ တဈစကျစကျ ကနြသေညျ။ ဆကျနောငျက မိုးယုနှငျ့ ဝတျမှုံတို့ကို လှတျပေးသညျ။ သို့သျော လညျပငျးတှငျ ခှေးလညျပတျ ပတျပေးလိုကျသညျ။ ပွောငျနအေောငျ စားပေးကွ လီးရညျတို့ကို လကျြခိုငျးလသေညျ။ သူမတို့လညျး ဘာဖွဈဖွဈ အနအေထားတှငျ ရောကျသဖွငျ့ စားလိုကျသညျ။ မိုးယုက နားရှကျမှကပျပွီး တှဲကနြသေော ခပျခဲခဲ လီးရညျကို စလကျြပေးသညျ။ နောကျပါးပွငျတှငျ အစငျးလိုကျ ယိုနသေော လီးရညျကို လကျြသညျ။ သူမလကျြရသမြှကို ဝတျမှုံပါးစပျထဲ ထှေးထညျ့ပေးသညျ။ ဝတျမှုံကို မြိုခသြညျ။ နောကျ ဝတျမှုံက ပွနျလကျြသညျ။ ဝတျမှုံလကျြ၍ ရသမြှကို မိုးယုပါးစပျထဲ ထှေးထညျ့သညျ။ မိုးယုက မြိုခသြညျ။
ပထမတဈရကျဟူသော အနအေထားတှငျ ထိုမြှ အဆငျ့ရှိနပွေီ ဖွဈရာ သူမတို့ ထိပျလနျ့ရမညျလား ဝမျးသာရမညျလား မတှေးတတျတော့။ မိုးယုနှငျ့ဝတျမှုံတို့ အခငျြးခငျြး နှုတျခမျးစုပျသညျ။ အခငျြးခငျြး အကငြ်္ီခြှတျသညျ။ နို့သီးခငျြးခငျြး ပှတျသညျ။ ထမီခြှတျကွသညျ။ တဈယောကျပေါငျကွားထဲသို့ တဈယောကျပေါငျတဈဖကျစီထညျ့ကာ စောကျစခေ့ငျြးပှတျသညျ။ သူမတို့ကို ခိုငျနှငျးအား တဈယောကျတဈလှညျ့ဖကျကွ နမျးကွ ဆှဲကွ ကိုငျကွ နှိုကျကွလုပျနသေော ရဲလှငျ၊ ဘသကျ၊ ခဈြမောငျ၊ စိုးအောငျနှငျ့အတူ ယခုမှ ဘောငျးဘီခြှတျပွီး ကှငျးစထုနသေော ဆကျနောငျတို့ဖွဈသညျ။ လာ မိုးယုနှငျ့ ဝတျမှုံတို့နှဈယောကျ ဆကျနောငျပေါငျကွားထဲတှငျ ထိုငျခပြွီး လီးကိုစုပျပေးသညျ။ ဝတျမှုံက စစုပျသညျ။ မိုးယုက လပွှတျကိုပငျ့ပေးထားသညျ။ ဝတျမှုံဖယျတော့ မိုးယုက လပွှတျကို စုပျပေးသညျ။ ဝတျမှုံက ဆကျနောငျပေါငျကို ခှက အဖုတျနဲ့ပှတျရငျး ကှငျးထုပေးရငျး လြှာနဲ့လကျြသညျ။ မိုးယုက လပွှတျကို စုပျရငျးဆှဲကာ လှတျသညျ။ ဝတျမှုကလညျး လီးထိပျကို စုပျသညျ။ မငျးတို့နှဈယောကျ ကုနျးလိုကျ မိုးယုနှငျ့ ဝတျမှုံတို့က ကုနျးလိုကျသညျ။
ပေါငျနညျးနညျးကား သူမတို့ကလညျး ခိုငျးသညျ့အတိုငျးလုပျသညျ။ ဟေ့ သူငယျခငျြးတို့ ဘယျဖငျပေါကျက ပိုလနျးလဲ ဆန်ဒမဲလေး ပေးကွပါဦးကှ ခဈြ ဆုံးဖွတျပေးကှာ ရဲလှငျက ခိုငျနှငျးကို ဖကျရငျးထလာပွီး ပါးကို တရှတျရှတျနမျးကာ ပွောသညျ။ အေး ဟုတျတယျ၊ ခိုငျနှငျး မငျးဆုံးဖွတျ ဟုဆိုကာ ဆကျနောငျက ပွောလိုကျသညျ။ တဈဆကျတညျးပငျ ဆကျနောငျက မငျး လကျြပေးရမှာပဲ၊ မငျး လကျြတဲ့ဖငျကို ငါအရငျခမြယျ ခိုငျနှငျးက ဝတျမှုံဖငျကို လကျြရနျ တငျကို ဖွဲလိုကျသညျ။ မိုးယုက ခိုငျနှငျးဖွဲပေးထားသော ဝတျမှုံဖငျညှောငျ့ရိုးပျေါသို့ တံတှေးထှေးခသြညျ။ တံတှေးက ဝတျမှုံ၏ ဖှေးနုနသေော ဖငျစီးကွောငျးအတိုငျး စီးဆငျးသှားပွီး ဖငျပေါကျတညျ့တညျ့တှငျ စုသညျ။ ခိုငျနှငျးက စောကျပတျအထကျမှနေ၍ လြှာကို အပွားလိုကျထားကာ ဖငျပေါကျကို လကျြသညျ။ အှနျးးး ဝတျမှုံသညျ ဆကျနောငျလီးကို ငုံရငျး ဖငျမှ ခိုငျနှငျး၏ လြှာကွမျးကွမျးဖွငျ့ လကျြသညျကို ဖီးလျတကျသဖွငျ့ ညညျးမိသညျ။ စီးထားသော သူမဆံပငျကို ကိုငျကာ သူမဖငျအလကျြခံသညျကို စောငျ့ကွညျ့ရငျး ပါးစပျထဲ လီးကို ထိုးသှငျးထားသော ဆကျနောငျ၏ ပေါငျကို ဖကျထားသညျ။
အ ကြှတျ ကြှတျ ဆကျနောငျ စသှငျးပွီ။ မိုးယုက ဖငျကို ဖွဲပေးထားသညျ။ ခိုငျနှငျးက ဖငျပေါကျထဲတညျ့အောငျ သိပျထညျ့ပေးသညျ။ လီးခေါငျးကို အတငျးထိုးသိပျရသညျ။ စောကျပတျထဲဝငျသညျနှငျ့ မတူသဖွငျ့ ဝတျမှုံမှာ တအငျးအငျးနဲ့ ညညျးရသညျ။ တျောတျောလေးကို နာသညျ။ လီးခေါငျးမွုပျကတညျးက နာနရော ဇှတျထိုးထညျ့သညျ့ အနအေထားတှငျ ပိုနာသညျ။ နာလိုကျတာကှာ၊ ကိုယျ့လီးကို မနျးပေးပါဦး ဆကျနောငျက ခိုငျနှငျးကို လီးစုပျခိုငျးသညျ။ ခိုငျနှငျးက ဝတျမှုံဖငျမှ ထုတျလာသော လီးကို စုပျပေးသညျ။ ဝူးးး ဆကျနောငျက ပွနျလိုးသညျ။ မိုးယုက ဖွဲပေးသညျ။ တျောတျောကွာတော့ မွုပျဝငျသှားသညျ။ ဝတျမှုံတျောတျော အျောရသညျ။ ခြီးယား ဆရာ့ရဲ့ အောငျမွငျမှုအတှကျ နောကျနောငျလညျး ဆရာသမား အသဈကလေးတှေ မြားမြား ဖောကျနိုငျပါစေ တဈယောကျတဈပေါကျ ခြီးကြူးကွပွီး အရကျခှကျမကာ သောကျကွသညျ။ ဆကျနောငျက ဖွညျးဖွညျးခငျြးဆှဲသညျ။ ဝတျမှုံမှာ ခြှေးမြားပွနျနသေညျ။ ဖငျထဲတဈခုခုဆို့နသေလို ခံစားရသညျ။ ဖငျကို ငါးမိနဈလောကျ စိမျလိုးပွီး စောကျဖုတျကို တှယျသညျ။
ပုံစံပွောငျးကာ ဖငျခလြိုကျ စောကျပတျလိုးလိုကျလုပျသညျ။ ဆကျနောငျပွီးတော့ တျောတျောလေး မိုးခြုပျနပွေီ ဖွဈသဖွငျ့ မောမောနဲ့ အိပျပြျောသှားကွသညျ။ တျောတျောနဲ့ အိပျမပြျောသူမှာ မိုးယုဖွဈသညျ။ အိပျပြျောသှားတော့လညျး ဖငျကို ဝိုငျးလိုးကွသညျဟု အိပျမကျမကျသဖွငျ့ လနျ့နိုးပွနျသညျ။ အိပျပြျောအောငျ တျောတျောလေး ကွိုးစားသျောလညျး အိပျမရ ဖွဈနသေညျ။ ဖတျြခနဲ အိပျပြျောမညျလုပျတော့ အိပျယာက နိုးနိုးခငျြး မကျြနှာမသဈသေးခငျ မွငျရတဲ့ ပုံစံဟာ မိနျးကလေးတှရေဲ့ ပကတိပုံစံ အစဈကှ၊ စိုးအောငျနဲ့ ခဈြမောငျက ခိုငျနှငျး၊ ရဲလှငျနှငျ့ ဘသကျက ဝတျမှုံလေးနဲ့ မိနျးကလေးတှေရေဲ့ ပကတိပုံစံ ဖွဈတဲ့ သဘာဝအလှရဲ့ အရသာကို မကျြနှာ မသဈခငျ တဈခြီ ခံစားကွကှာ၊ ငါတော့ အားလုံး ကကျြသရေ မင်ျဂလာနှငျ့ ပွညျ့စုံသှားအောငျ သူ့ဖငျကို ဟောဒီလီးနဲ့ ဖောကျပေးမယျ၊ ကနြေပျကွလား မငျးကွီးမြား ကနြေပျကွကွောငျးပါ ဘုရား။
သငျ့လြှျောလြောကျပတျမှုကော ရှိရဲ့လား သငျ့လြှျောကွောငျးပါ ဘုရား ဆကျနောငျ၏ သူမတငျကို ပုတျကာ ပုတျကာ ပွောသောစကားကို သူတို့ပိုငျဆိုငျသညျ့ တဈယောကျထံ ခဉျြးကပျကွရငျး ကောငျးခြီးသွဘာ ပေးနကွေသညျ။ မိုးယုမှောကျအိပျနသေညျ။ ဆကျနောငျက သူမပေါငျကွားထဲသို့ လေးဘကျထောကျ ဝငျလာသညျ။ ပကျ သူမဖငျပေါကျပျေါတညျ့တညျ့ တံတှေးစကျ ကလြာသညျ။ ဝူးးးးးး ဟူးးးးးးးး ဆကျနောငျက ခှေးလို အူကာ သရျောသညျ။ နောကျ လြှာပွားဖွငျ့ လေးငါးခကျြ ခှေးမြား အမဲရိုးလကျြသလို သူမဖငျပေါကျကို လကျြသညျ။ ထှီ ဆကျနောငျက သူ့လီးဆှတျဖုိ့ လကျဝါးပျေါ တံတှေးထှေးခပြွီး လီးကို သုတျသညျ။ မနကျ ခွောကျနာရီထိုးနပွေီ ဖွဈသျောလညျး အတျောမှောငျရီနသေေးသညျ။ သို့သျော မိုးယုတဈယောကျ၏ ဖငျပေါကျထဲ လီးကွီး ပူခနဲ ထိုးဆငျးလာတော့ ပိုမှောငျသှားသညျ…….ပွီးပါပွီ။
ရပြီလား…. ထပ်သွင်းပေးဦး… ဒီလောက်ဆိုရင်ကော ထပ်သွင်းပေးဦး ရော့ ထပ်သွင်းပေးဦး ဖူးဖူးရောင်ကာ မို့မောက်ပြီး နီတွတ်နေသော ခိုင်နှင်း၏ စောက်ဖုတ်ထဲသို့ ဦးရဲနောင်က သူ့လီးကို တစ်ဆင့်ချင်း သွင်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။ ဦးရဲနောင်မှာ အသက်ငါးဆယ် ကျော်နေပြီ ဖြစ်သော အဘိုးကြီးဖြစ်သည်။ ခိုင်နှင်းမှာ ဦးရဲနောင်မှ မွေးစားထားသော သမီးဖြစ်သည်။ ဦးရဲနောင်မှာ အိမ်ထောင်ရှိစဉ်ကာလက သားသုံးယောက် ထွန်းကားခဲ့သည်။ သမီးလိုချင်ခဲ့သော်လည်း မိန်းမဖြစ်သူမှာ သားသုံးယောက် မွေးပေးပြီးနောက် ဆုံးသွားသည်။ သမီးလိုချင်၍ ရူးနေသော ဦးရဲနောင်အတွက် တစ်ရက်တွင် အိမ်ရှေ့တွင် မွေးကင်းစ ကလေးငယ်လေး ပစ်ချထားသည်ကို တွေ့ရသဖြင့် မဖြစ်မနေ မွေးစားလိုက်ရသည်။ သမီးလေး လိုချင်နေခိုက်မို့ နတ်ပေးသည့် သမီးလေးအဖြစ် မွေးစားခဲ့သည်။ သမီးလေးကို သားသုံးယောက်နှင့် တန်းတူ ပညာသင်ပေးခဲ့သည်။ သားသုံးယောက်မှာ သူ၏ စီးပွားရေးအရှိန်အဝါကြောင့် ဆိုးချင်တိုင်းဆိုး ကဲချင်တိုင်းကဲသလောက် သမီးလေးမှာ လိမ္မာသည်။
သမီးလေး ဆယ်တန်းအောင်သွားသည့်နောက် ကွန်ပျူတာသင်တန်းများ အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းများ ပို့ပေးသည်။ သမီးလေးက ကြိုးစားသဖြင့် ကွန်ပျူတာလည်းတော် အင်္ဂလိပ်စာလည်းတော် ဖြစ်နေသည်။ ထိုတော်လှ တတ်လှသော သမီးလေးအပေါ် စိတ်ရိုင်းဝင်မိသူမှာ သူကိုယ်တိုင်ပင် ဖြစ်နေသည်။ သဘာဝစည်းကမ်းနဲ့အညီ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာသော ရင်သားများ တင်လုံးများမှာ သူ့အား ဘယ်လိုမှ ထိန်းချုပ်၍ မရနိုင်တော့သဖြင့် တစ်ည သမီးအခန်းကို ဝင်အိပ်ခဲ့သည်။ ခိုင်နှင်း၏ ဘဝထိုညတွင် ကျေးဇူးရှင်အား အပျိုစင်ဘဝဖြင့် ကျေးဇူးဆပ်ခွင့်ရသည်။ အကိုကြီး အတော်လေး ဆာနေသည်ဟု ထင်ပါသည်။ ထိုညတစ်ညတည်း သုံးချီဆွဲသည်။ သူမက နာပင်နာငြားသော်လည်း ကြိတ်မှိတ်အောင့်ခံပေးသည်။ နောက် နှစ်ရက် သုံးရက်အထိ အကိုကြီးကို မတွေ့ရ။ ရှက်၍လား။ အားနာ၍လား ဘာကြောင့်တော့ မသိ။ တစ်ညတွင် အကိုကြီး ခိုးပြန်လာမှန်း ခိုင်နှင်းသိသည်။ သားဖြစ်ကြသော သက်နောင်၊ လတ်နောင်၊ ဆက်နောင်တို့ မရှိကြ။ ခိုင်နှင်းက အကိုကြီး အခန်းထဲ ဝင်ခဲ့သည်။
အကိုကြီး သိသော်လည်း မသိချင်ယောင်ဆောင်နေမှန်း သူမ သိသည်။ ထို့ကြောင့် အဝတ်များ အကုန်ချွတ်ချလိုက်သည်။ အကိုကြီး၏ ဘေးတွင် အသာလေး ထိုင်ချကာ ဘောင်းဘီဇစ်ကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး ဘောင်းဘီကို နည်းနည်းချွတ်သည်။ အတွင်းခံကို ပွတ်သပ်ပေးရာ မကြာမီ အကိုကြီး ဟာကြီးက နွေးပြီးမာလာသည်။ အတွင်းခံကို ချွတ်လိုက်သည်။ မာတောင်နေသော အကိုကြီးလီးကို စစုပ်ပေးသည်။ တော်တော်လေးစိုသောအခါ သူမတက်ခွပြီး သွင်းထည့်လိုက်သည်။ အကိုကြီးကို ကြည့်လိုက်တော့ သူမကို ကြည့်နေသည်။ အကိုကြီးလက်ကို ဆွဲယူပြီး နို့များကို ကိုင်စေသည်။ အကိုကြီးက နို့ကိုသာသာလေးကိုင်ထားချိန်မှ သူမလည်း ဆောင့်ချပေးသည်။ အရှိန်ကောင်းလာတော့ အကိုကြီးက သူမခါးကို ဖက်ကာ ဆွဲအိပ်လိုက်သည်။ အပေါ်မှ ခပ်ပြင်းပြင်းလိုးချသည်။ အကိုကြီးလို့ ခေါ်တော့မယ်နော် ကလေးရယ် အကိုကြီးအတွက် ကလေးက ဘာမဆို ပေးဆပ်ဖို့ အသင့်ပါ အကိုကြီးကို ခွင့်လွတ်တယ် မဟုတ်လားဟင် အို အကိုကြီးကလည်း ကလေးက ပေးဆပ်ဖို့ အသင့်ပါဆိုမှ။
အကိုကြီးက သူမကို လိုးပြီးချိန် ရင်ခွင်ထဲ ထည့်ကာ ပါးကို တရွှတ်ရွှတ်နမ်းရင်း ပြောသည်။ နှုတ်ခမ်းကို ငုံသည်။ သူမလည်း ပြန်နမ်းသည်။ ကလေးက အရမ်းလှလွန်းလို့ပါ ကျေးဇူးပါ အကိုကြီး ခုနက စုပ်ပေးတော့ မရွံဘူးလား ဟင့်အင်း ရွံပါဘူး၊ အကိုကြီး အရသာ ပိုရှိအောင်လို့ အကိုကြီးလည်း ကလေးဟာလေးကို လျက်ပေးမယ်လေ ဟာ ကလေး ငရဲကြီးကုန်မှာပေါ့ ငရဲတွေ ဘာတွေ မလိုပါဘူးကလေးရာ ကောင်းဖို့ပဲလိုတယ် သဘော သဘော ကလေးကို နည်းမျိုးစုံနဲ့ ပိုကောင်းအောင် လုပ်ပေးမယ်နော် သဘော သဘော ဦးရဲနောင်က သူမကို ခေါင်းအုံးတွင် အိပ်စေလိုက်ပြီးနောက် ပါးမှတစ်ဆင့် အောက်သို့ ဖြည်းဖြည်းချင်း နမ်းဆင်းလာသည်။ နို့ကိုလည်း အားပါးတရစုပ်သည်။ နံရိုးများကို ပွတ်သပ်သည်။ ချက်ကို လျှာဖျားဖြင့် ကလိသည်။ အမွေးမပေါက်သေးသော သူမစောက်ပတ်တစ်ဝိုက်ဘေးကို နှုတ်ခမ်းဖြင့် အရင်စုပ်နမ်းသည်။ အနမ်းနွေးနွေး တစ်ချက်ရတိုင်း သူမမှာ ကော့တက်နေသည်။ ရင်ခေါင်းထဲမှ ထွက်လာသော ညည်းသံများလည်း ထွက်ကျနေသည်။ စောက်စေ့ကို စုပ်နမ်းလိုက်တော့ သူမအော်သည်။
အား အကိုကြီး အား အရမ်းကောင်းတယ် အား သို့နှင့် သမီးနှင့် အဖေမှ အကိုကြီးနှင့် ကလေးဘဝကို ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။ သူမအသက် ဆယ့်ခြောက် နှစ်မှ ယခု နှစ်ဆယ့်ရှစ် နှစ်အထိ ကလေးတွေ လှစ်တိုင်း အကိုကြီးစိတ်တိုင်းကျ ခံပေးလာခဲ့သည်။ ပါးစပ်နဲ့ ပြီးပေးခြင်း၊ နို့နှင့် ပြီးပေးခြင်း၊ ဖင်နဲ့ပြီးပေးခြင်းစသည့် နည်းမျိုးစုံဖြင့် အကိုကြီး လိုလေသေးမရှိအောင် ပြုစုလာခဲ့ရာ အကိုကြီးပင် ဘုရားသွား ကျောင်းတက်အရွယ်သို့ ကပ်လာခဲ့ပြီ။ သူမကို သမီးအဖြစ်ဖြင့် ကွန်ပျူတာ သင်တန်းငယ်လေးတစ်ခု ဖွင့်ပေးထားသည်။ သင်တန်းဆိုသည်မှာလည်း အမည်ခံမျှသာ။ ကောင်မလေး နှစ်ယောက်ကို လက်ထောက်ခန့်ထားပြီး အကိုကြီးနဲ့ ပျော်ပါးနေသည်က များသည်။ သို့သော် ခုတလော အကိုကြီး နေမကောင်း ဖြစ်နေသဖြင့် ငတ်နေသည်မှာ နှစ်လကျော်ပြီ ဖြစ်သည်။ ရောဂါက ကျောက်ကပ်ရောဂါ ဖြစ်သည်။ လူက ဖြည်းဖြည်းချင်း ပိန်ချုံးလာနေသည်။ ခါတိုင်း ငတ်လျှင် ငါးရက် အများဆုံးဖြစ်သည်။ ငါးရက် ငတ်သော်လည်း ခွင့်ရသောနေ့ဆိုလျှင် ငါးရက် ငတ်ခဲ့သမျှ ပြေသည်။ ခုတော့ ဆက်ငတ်တော့မည့် အနေအထားတွင် ဖြစ်နေသည်။
လူကြံလျှင် ဘယ်အရာမှ မအောင်မြင်ဘူး ဟူသည်မှာ မရှိ။ထပ်သွင်းပေးဦး မောင် ကြောက်တယ် ထပ်သွင်းပါဆို ခံတဲ့သူက ထပ်သွင်းခိုင်းတာ လိုးနေတဲ့သူက ကြောက်နေရတယ်လို့ ရပြီလားဟင် ထပ်သွင်းဦး ဆုံးအောင်သွင်း ကျော်ကျော် အမည်ရှိသော သင်တန်းသား ကောင်လေးသည် ခိုင်နှင်းအမည်ရှိ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းပိုင်ရှင် ဆရာမ၏ ဖင်ကို လိုးရာမှာ ကြောက်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ လေးဘက်ထောက်ကုန်းပေးထားသော ခိုင်နှင်း၏က တင်ကို စွင့်နေအောင် နောက်သို့ ပစ်ထားပေးပြီး သူက ခါးကို နိုက်ကာ ဖင်ပေါက်ကို လိုးရသည်။ ကျော်ကျော်က သူများတွေလို လည်လည်ဝယ်ဝယ်ကြီး မဟုတ်။ နည်းနည်း အူသည်။ ထို့ကြောင့် ဖင်ကို တကယ်လိုး၍ ရ မရ မသိ ဖြစ်နေသည်။ လီးကတော့ ဖင်ပေါက်ထဲ တော်တော်လေး မြုပ်ဝင်နေပြီ ဖြစ်သည်။ ဆုံးအောင်သွင်း ဆိုသဖြင့် သူလည်း မရမက ဆက်သွင်းသည်။ စိမ်ထားပြီး ထိုးမွှေပေးစမ်းပါ ခိုင်နှင်း လူရွေးမှန်ခဲ့သည်။ လူက အူကြောင်ကြောင်ပေမယ့် လီးက သူမလိုချင်သည့် အဆင့်မီသည်။ ကျော်ကျော်ကို သူမ ဘယ်လိုဖန်သနည်း။
ကျော်ကျော်က သင်တန်းတွင် နည်းနည်းထိုင်းသည်။ ပြောပြီး ခဏနေ ပြန်မေ့သည်။ သင်တန်းပြီး၍ နောက်သင်တန်း မရှိသောအခါ သူမက ကျော်ကျော်ကို ခဏခေါ်ထားသည်။ ကျော်ကျော် မင်းနေခဲ့ဦး ဟုတ် အတန်းသားများများစားစား မရှိသော သင်တန်းလေး ပြီးဆုံးသွားသောအခါ အားလုံးပြန်ကုန်ကြသည်။ မင်း မျက်လုံးလေး ခဏမှိတ်ထားလိုက်စမ်း ကျော်ကျော်က ဘုမသိ ဘမသိ မျက်လုံးကို မှိတ်လိုက်သည်။ အကိုကြီး စိတ်တိုင်းကျ ဆုတ်နယ်ခဲ့သော သူမနို့သည် တွဲအိကျလုနီးပါးဖြစ်ကာ စွင့်ကားနေသည်။ ထိုနေ့တွင် သူမက နဂိုရ်အကြံဖြင့် ဘော်လီအတွင်းခံ ဝတ်မထား။ ကျော်ကျော်ခေါင်းကို အသာကိုင်ကာ ရင်အနည်းငယ်ဖွင့်ပြီး မျက်နှာကို အုပ်ကာ ပွတ်လိုက်သည်။ ကျော်ကျော်က ကြောင်အအ ဖြစ်ကာ နောက်ဆုတ်သည်။ ငြိမ်ငြိမ်နေ ခိုင်နှင်းသည် နို့ဖြင့် ကျော်ကျော်မျက်နှာကို ဆက်ပွတ်သည်။ ကျော်ကျော်ကလည်း ရိုးသာရိုးသည်။ ဒါမျိုးကျတော့ သိသည်။ သိလည်း သိပေမပေါ့။ စာသင်ပေးသောဆရာမ ဟိုဘက်လှည့်လိုက်တိုင်း ဖင်ကြီးက ကားထွက်နေသည်။
ကားထွက်နေသော ဖင်ကိုကြည့်ရင်း လီးကအငြိမ်မနေ။ ခဏ ခဏစိတ်ကူး ကွင်းထုခဲ့သည့် ဖင်ကားကားနဲ့ ဆရာမက နို့လာစုပ်ခိုင်းနေတော့ ကျော်ကျော်လည်း ဘာပြောကောင်းမတုန်း ဆိုသည့် အနေအထား။ တစ်ချက်လောက် ကြောင်သွားသည့် အနေအထားမှ ခိုင်နှင်းအိုးကို မသိမသာဖြင့် မရဲတရဲလှမ်းကိုင်သည်။ အိုးကို ကိုင်ရမလိုလို မကိုင်ရမလိုလိုတော့ ဖြစ်နေသေးသည်။ နို့အုံ အိထွေးထွေးကြီး မျက်နှာမှာ အငမ်းမရ အိနေသည်။ ကျော်ကျော်သည် ခိုင်နှင်း၏ အိုးကြီးကို မိမိရရ ကိုင်ဆုတ်သည်။ နောက်မှ ဆရာမ၏ စကဒ်ဇစ်ကို ဖြုတ်လိုက်သည်။ စကဒ်ချွတ်လိုက်ပြီးနောက် ကျော်ကျော်က ဒူးထောက်ထိုင်ချကာ ဖွေးအိနေသော ပေါင်နှစ်ဖက်ကို ဖက်ကာ ပွတ်သပ်ပြီး ပေါင်ကြားကို လျက်ပေးလိုက်သည်။ စောက်ဖုတ်က ပိုပြီး မှောက်နေသည်။ အမွေးလည်း နည်းသည်။ စောက်စေ့ကတော့ တော်တော်ညိုနေသည်။ ခိုင်နှင်းက ကြမ်းပြင်ပေါ်တွင် ကားပေးထားရင်း ဘောင်းဘီချွတ်နေသော ကျော်ကျော်လီးကို အငမ်းမရ လှမ်းကြည့်သည်။ ကျော်ကျော့်လီးကြီးကို တွေ့လိုက်တော့မှ ရင်ထဲက အလုံးကျသွားသည်။
သူမက ခံသာ ခံချင်သည်။ လီးကလေး သေးသေးလေး ဖြစ်နေမှာ။ ပုတိုတိုဖြစ်နေမှာ ကြောက်သည်။ ခံသာ ခံပေးရသည် အရသာ မရမည်ကို စိုးသည်။ ခုတော့ ကျော်ကျော့်လီးက သူလိုအပ်သည့် စံချိန်မီသည်။ အ……. ကျွတ် ကျွတ် တကယ်နာလို့ အော်တာလား၊ ဖီးလ်ပိုရှိလာအောင် အော်တာလား တော့ ကျော်ကျော်မသိ။ ခိုင်နှင်း၏ စောက်ဖုတ်ထဲကို ဒစ်အရင်သွင်းပြီး ကျော်ကျော်ဆက်ထိုးသွင်းသည်။ အဆုံးထိထိုးပြီး ခဏစိမ်လိုက်သည်။ နို့ကို စို့လိုက်သည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း ညောင့်သည်။ ခပ်ပြင်းပြင်းလေး ဗျင်းသည်။ခိုင်နှင်းတော်တော် ကောင်းနေသလို ကျော်ကျော်လည်း တော်တော်ကောင်းသည်။ ငါးမိနစ်လောက်ဆွဲလိုက်ရသည်။ အရည်ကို တို့ဟာထဲ မထည့်နဲ့နော် အပြင်ထုတ် သိလား ဟုတ် ပြီးခါနီးတော့ ခိုင်းသည့်အတိုင်း အရည်ကို အပြင်ထုတ်သည်။ ကြမ်းပြင် တော်တော်ပေသွားသည်။ ဆရာမက ထပြီး တစ်ရှုးယူကာ သူ့ဟာကို သူသုတ်သည်။ သူလည်း အကုန်ညစ်ထုတ်ပြီး အကုန်လုံးကို လိုက်ရှင်းပေးလိုက်သည်။ မောင် ခင်ဗျာ မောင် ဟုခေါ်လိုက်သဖြင့် ကျော်ကျော်လန့်သွားသည်။
မ ကို စိတ်ဆိုးလား ခင်ဗျာ မောင်ကလည်းကွာ ခင်ဗျာချည်းပဲ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ အဲဒါကြောင့် မောင့်ကို အရမ်းချစ်မိသွားတာ သိလား ကျော်ကျော်မှာ ဘာမှန်း မသိတော့။ အဝတ်များ ပြန်ဝတ်ပြီးကြတော့ နှုတ်ခမ်းချင်း တော်တော်လေး စုပ်ဖြစ်ကြသည်။ သွားတော့နော် မောင်၊ အရမ်းချစ်တယ် သိလား သည်လိုဖြင့် နောက်တစ်နေ့ ဆက်လိုးသည်။ နည်းနည်း ကြမ်းလာသည်။ နောက်တစ်နေ့တော့ နည်းတွေ စုံလာသည်။ တော်တော်လေးကို နည်းပေါင်းစုံသိသည့် ဆရာမပင်။ ကျော်ကျော်ပင် ဖျားယူလောက်သည်။ ထိုအထဲ ယနေ့ ပိုထူးခြားသည်။ ယနေ့ ထူးခြားချက်ကိုတော့ဖြင့် ကျော်ကျော် စွဲလန်းသွားသည်။ မောင့်ကို ဒီနေ့ ထူးထူးခြားခြားလေး ဖြစ်စေချင်တယ် ဟုတ် မောင် နောက်ပေါက်ကို ချတာ မြင်ဖူးလား ဖင် ဖင်ပေါက်ကိုလား အင်းပေါ့ကွ ဗွီဒီယိုထဲမှာတော့ မြင်ဖူးတယ် ဒီနေ့ မရဲ့ ဖင်ကို ချပေးရမယ်နော် ကျွန်တော် အဲ မောင် ကြောက်တယ် မောင်ကလေ ခံတဲ့သူ ခံနေတာတောင် ကြောက်ရတယ်လို့များ ထိုကဲ့သို့ အခြေအတင် စည်းဝေးပြီးနောက် ခိုင်နှင်းဖင်ပေါက်ကို ရွှဲစိုသွားအောင် လျက်ပေးလိုက်သည်။
အစကတော့ သူမလျက်ပေးရဲပါ။ ရွံလည်း ရွံသည်။ သူရွံနေမှန်းသိသဖြင့် ခိုင်နှင်းက ဖင်ကို စောက်ပတ်ထက် ပြောင်အောင် နေ့တိုင်း ဆေးကြောင်း၊ စောက်ပတ်ကမှ သိပ်မဆေးဖြစ်ကြောင်း ပြောကာ လျက်ခိုင်းသည်။ စလျက်ခါစတော့ နည်းနည်း ရွံသော်လည်း ခဏတော့ အရှိန်တက်သွားသည်။ ကျုံ့နေသော ခိုင်နှင်းဖင်ပေါက်လေး စူပွပွဖြစ်လာသည်။ လျှာနှင့် ထိုးမွှေတော့ ခိုင်နှင်းတစ်ယောက် တရှီးရှီးနှင့်ကို ဖြစ်နေသည်။ လက်ဝါးထဲ တံတွေးထွေးထည့် လီးထိပ်ကို သုတ်ပြီး သူ့တံတွေးဖြင့် ရွှဲနစ်နေသော ခိုင်နှင်းဖင်ပေါက်ထဲသို့ လီးခေါင်းကို သိပ်ထည့်လိုက်သည်။ အ.. အု အ………. တော်တော်ကြပ်သည်။ မရမက ထိုးထည့်သော်လည်း မရတော့။ လီးကလည်း နာလာသဖြင့် သူတစ်ဝက်လောက်နဲ့ လိုးသည်။ ထိုအခါ ခိုင်နှင်းက ထပ်သွင်းခိုင်းပြန်သည်။ ငါးမိနစ်လောက် စိမ်ပြီး ဖိသွင်းလိုက်တော့ အထာကျသွားသည်။ စောက်ဖုတ်က စုပ်အားကောင်းသော်လည်း ဖင်က ကြပ်တော့ လိုးလို့ကောင်းသည်။ တစ်ခါပြန်ထုတ်ပြီး ဖင်ပေါက်ထဲ တံတွေးထွေးထည့်ကာ ပြန်သွင်းသည်။ ကြပ်မြဲကြပ်သည်။
တင်လုံးကြီး ခါထွက်နေအောင် ကျော်ကျော်ဆောင့်လိုးတော့သည်။ ကျော်ကျော်စွဲသွားသည်။ ကာမ အရသာကို ခိုင်နှင်းက အပြည့်အဝခံစားသည်။ စောက်ဖုတ်၊ ဖင်၊ ပါးစပ်စုံနေသည်။ ဆရာမက ပါးစပ်ဖြင့် ပြီးပေးတော့ ကျော်ကျော်မှာ အားနာနေသေးသည်။ လျှာပေါ် လီးရည်တွေ အဖွေးသား ကွင်းထုချပေးလိုက်သည်။ ခိုင်နှင်းက လျှာပေါ်ဖွေးတက်နေသော သူ၏ လီးရည်ကို တက်တက်စင်ကုန်အောင် မြိုချပြသည်။ ပါးစပ်ထဲ လီးရည် တစ်စက်မှ မကျန်တော့အောင် ကုန်သွားပြီးနောက် လီးထိပ်တွင် ကပ်ကျန်နေသော လီးရည်ကိုလည်း စုပ်ပေးသည်။ တစ်လဆိုသော အတောအတွင်း ကျော်ကျော် ထိန်းသိမ်းခဲ့သော်လည်း အရက်မူးသောအခါ အဆောင်မှ အတူနေ သူငယ်ချင်းကို ထိုအကြောင်း မဖွင့်ဟဘဲ မနေနိုင်တော့။ထပ်သွင်းပေးဦး နှစ်ယောက်လုံးလား လျှာရှည်လိုက်တာ၊ တစ်ယောက်က ရှေ့ပေါက်၊ တစ်ယောက်က နောက်ပေါက်ပေါ့ ခိုင်နှင်းသည် ရတောင့် ရခဲအခွင့်အရေးလေးကို ရသဖြင့် အတော်ပင် ဝမ်းသာသည်။ ယောကျာ်းနှစ်ယောက်ကို တပြိုင်နက်တည်း ခံပေးရာတွင်။
ယောကျာ်းများ နည်းတော့ နည်းသေးသော်လည်း သိပ်ပြီး မိန်းမပျက်တော့ ဆန်လို့ မဖြစ်။ ကျော်ကျော်က သူ့သူငယ်ချင်းမှ မဖြစ်မနေ လိုက်လာတော့မည် ပြောတော့ ထိုနေ့ စိတ်ဆိုးချင်ယောင်ဆောင်ပြီး ကျော်ကျော်ကို မပေးလိုက်တော့။ ဆ ဆရာမ.. အဲ မ ဘာဖြစ်တာလဲ၊ ဘာလို့ တုန်နေတာလဲ ကျွန် ကျွန်တော် အ အဲ မောင်လေ၊ ဆရာမနဲ့ အကြောင်းကို သူ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဖွင့် ဖွင့်ပြောမိတယ် ဘာ အဲ အဲဒါ သူ သူငယ်ချင်းက မနက်ဖန် လိုက်လာမယ်တဲ့ ကျော်ကျော် နင် ငါ့ကို ဘယ်အစားထဲ အောက်မေ့နေလို့လဲဟင်၊ အလိုလိုက်လို့ နင် အမိုက်စော်ကားတာလား အဲ အဲလို မဟုတ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ၊ အရက် အရက်မူးပြီး စ စကားကျွံ ကျွံသွားလို့ပါ၊ သူ သူငယ်ချင်းက ကျွန်တော့်ကို ခြိမ်းချောက် နေပြီ မင်းကွာ မင်း… ခိုင်နှင်း စိတ်အကြီးအကျယ် ဆိုးပြလိုက်သည်။ သွား ဘာညာငေါက်ထုတ်လိုက်သည်။ နောက်နေ့ မလာနဲ့တော့ ဆိုသည့် စကားတော့ မပါ။ ကျော်ကျော် ထိုနေ့ငိုက်စိုက် ငိုက်စိုက် ပြန်သွားသည်။ အိမ်ရှေ့ခြံမှ ကျော်ကျော်ထွက်သွား သောအခါ ခိုင်နှင်း ကြိတ်ပြုံးလိုက်သည်။
နောက် အသံထွက်အောင်ပါ ရယ်မိလိုက်သည်။ ထွန်းထွန်းတဲ့ ဆရာမ၊ ဟု ကျော်ကျော်မှ မိတ်ဆက်ပေးသည်။ ထွန်းထွန်းက လက်သွက်သည်။ သူမ မေးစေ့ကို ကိုင်သည်။ သူမ ပုတ်ချလိုက်သည်။ ငါ ပြောမယ်၊ ငါက မင်းတို့ ထင်တဲ့ အတန်းစားထဲက မဟုတ်ဘူး၊ အရင်က ဘာပဲဖြစ်ခဲ့ ဖြစ်ခဲ့ အခု မင်းတို့ အခန်းထဲက ထွက်သွားကြပါ သူမက ကျော်ကျော်ရင်ဘတ်မှ တွန်းလိုက်သည်။ အခန့်မသင့်သယောင် ဟန်ဆောင်က ရင်ခွင်ထဲ လဲကျသည်။ ထွန်းထွန်းက နောက်မှ သိမ်းဖက်သည်။ နို့ကြီးကို အတင်းကိုင်ကာ နောက်ကို တေ့ထားသည်။ ရုန်းမရသည့် အနေအထားသို့ ရောက်အောင် သူမကိုယ်တိုင် ဖန်တီးပြီးရုန်းသည်။ ကျော်ကျော်က နှုတ်ခမ်းကို စုပ်သည်။ ထွန်းထွန်းက တင်လုံးကြီးကို ဆုတ်ကိုင်သည်။ ထွန်းထွန်းက ပိုကြမ်းသည်။ တင်လုံးများ စုတ်ပြတ်လောက်အောင် ကိုင်သည်။ ထမီကိုချွတ်ချသည်။ ကျော်ကျော်ပြောတော့ ခင်ဗျားက အစုပ်ကောင်းတယ်တဲ့၊ အရင်စုပ်ပေးပေါ့ ထွန်းထွန်းသည် သူမကို ထိုင်ချအောင် နိုက်ချကာ ဘောင်းဘီကိုချွတ်သည်။ လီးကို ထုတ်သည်။ အားပါး လီးက သူမလိုချင်သည့် ပုံစံရှိသည်။
ထိပ်ချွန်ပြီး တုတ်၍ ရှည်သည်။ ကျော်ကျော်လည်း ချွတ်သည်။ သူမ လီးနှစ်ချောင်းကို တစ်ဖက်စီကိုင်ကာ ကွင်းထုပေးလိုက်သည်။ ခင်ဗျားကြီး လိမ္မာနေရက်သားနဲ့ မိုက်ချင်နေတယ်၊ လောလောဆယ်တော့ ကျုပ်ဟာ အရင်စုပ် ခိုင်နှင်းလည်း မျက်စိမှိတ် ပါးစပ်ဟကာ ထွန်းထွန်း၏ လီးကို တစ်ချက်တည်း အာခေါင်စိုက်အောင်ငုံလိုက်သည်။ ပါးစပ် အစွမ်းကို ဟပြီးငုံသဖြင့် လီးတစ်ဝက်ကျော် မြုပ်ကာ အာခေါင်ကို လာစိုက်သည်။ သူမဆက်ငုံသည်။ လည်ချောင်းထဲသို့ပင် လီးရောက်သွားသည်ဟု ထင်ရသည်။ မိုက်တယ် ခိုင်နှင်းက ထွန်းထွန်းလီးကို ပြန်ကိုင်ကာ ကျော်ကျော်လီးကို ထပ်ငုံပေးသည်။ ကိုယ့်ဟာကြီးကို ကြာကြာငုံပေးပါ အချစ်ဆုံးကြီးရဲ့၊ သူ့ဟာက မင်းနည်းနည်းရိုးနေပြီလေ၊ လာပါ ကိုယ့်ဟာကို ငုံ ကျော်ကျော်လီးကို ငုံထားသော သူမခေါင်းကို ဆွဲကာ သူမပါးစပ်ထဲ လီးကို အဆုံးထိုးသွင်းသည်။ ပြီးတော့ ရမ်းလိုက်သေးသည်။ အူး ဝူးဝူးးး မိုက်တယ် ထွန်းထွန်းက တမိုက်တည်း မိုက်နေတော့သည်။ ထွန်းထွန်းက လီးစုပ်ခိုင်းရာ ကြမ်းသလို စောက်ပတ်လျက်လည်း ကြမ်းသည်။
စောက်စေ့ကို ကိုက်ပြီး ဆွဲရမ်းသဖြင့် သူမတော်တော်လေး အော်ရသည်။ စောက်ခေါင်းထဲကိုလည်း လက်ညိုးသုံးချောင်း ထိုးသွင်းကာ ခပ်ကြမ်းကြမ်းမွှေသည်။ လိုးတော့လည်း ချိန်ပြီးနောက် ပစ်လိုးထည့်သည်။ သူမက ထင်မထားသည့်အတွက် တော်တော်နာသည်။ အဆုံးထိကို ပစ်သွင်းသည်။ အဆုံးထိ ထုတ်သည်။ လေးငါးချက် လုပ်ပြီးမှ ခပ်သွက်သွက်ဆွဲသည်။ ကျော်ကျော်နေခဲ့တော့ ဖြစ်နေသည်။ ပက်လက်အိပ်ပေးထားသော သူမနို့အား ကျော်ကျော်က လာစို့သည်။ ထွန်းထွန်းက သူမပေါင်ကို အားကုန်ဖြဲကာ စောက်ပတ်ကို အားကုန်ဆော်နေသည်။ ဝူး မောလိုက်တာ၊ ခင်ဗျားကြီး အပေါ်က တက်ဆောင့်တဲ့အလှည့်ပေါ့ ကျော်ကျော်သည် ခပ်ကြမ်းကြမ်းပင် ဆွဲနှုတ်ကာ ပက်လက်အိပ်ပြီး လီးကို အထောင်လိုက်ကိုင်ထားသည်။ သူမ တက်ခွလိုက်ပြီး တေ့ကာ ဆောင့်ချလိုက်သည်။ ကျော်ကျော်ကို ခေါ်လိုက်သည်။ ထပ်သွင်းပေးဦး နှစ်ယောက်လား တော်တော်ထုံသည့် ကျော်ကျော်ကို စိတ်တိုမိသေးသည်။ သို့သော် သူမကို နောက်ကနေ ခွကာ ဖင်ပေါက်ထဲ လီးကို စိုက်ချလိုက်တော့ ကျော်ကျော်ကို ကျေးဇူးတင်ပြန်သည်။
ကျော်ကျော့် ကျေးဇူးကြောင့် ခုလို ဇိမ်အပြည့်ခံရသည် မဟုတ်ပါလား။ ကျော်ကျော်က ထိုးသွင်းလိုက်သည့်နှင့် အောက်ကိုလည်း ဆောင့်ချပေးသလို ဖြစ်နေပြီ။ ထွန်းထွန်းက သူမနို့ကို အောက်ကနေပြီး ကြေနေအောင် ဆုတ်ကိုင်သည်။ ငါလည်း ဖင်ချဦးမယ်၊ မင်းအောက်က နေဟေ့ကော် ထွန်းထွန်းက ကျော်ကျော်ကို ပြောသည်။ သို့ဖြင့် နေရာချိန်းပေးလိုက်သည်။ ထွန်းထွန်းကို ဖင်ဇွတ်လိုးမည် ကြောက်နေသေးသော်လည်း ထွန်းထွန်းက ဖင်ကိုတော့ အကြမ်းကြီး မချ။ ဖြည်းဖြည်းချင်း တော့သည်။ ဇိမ်တမျိုး ရှိသည်။ အတွေးတွေက ဟိုရောက်ဒီရောက် ဖြစ်နေသည်။ ဦးရဲနောင် လီးပျော့ကြီးကို မြင်လိုက်။ ၎င်း၏ သားသုံးယောက် မျက်နှာကို မြင်ယောင်လိုက် ဖြစ်နေသည်။ ဘယ်တတ်နိုင်မလဲလေ။ ကိုယ်က ဆာနေပြီကိုးဟု တွက်ကာ ဖြေတွေးစဉ် ထွန်းထွန်းက ဖင်ထဲကို ခပ်ကြမ်းကြမ်းသွင်းလာသဖြင့် အားလုံးမေ့ကာ ဖီးလ်အစစ်တက်လာပြန်သည်။ ထွန်းထွန်းက သူမပခုံးကိုကိုင်ကာ ဖင်ကို အားပါးတရ ဆောင့်လိုးသည်။ ဖင်ပေါက် အနားစွန်းများ စုတ်ပြတ်သတ်သွားမည်ကိုပင် ကြောက်ရသေးတော့။
ကျော်ကျော်လီးရည်များကို ပါးစပ်ဖြင့် ခံပေးပြီးနောက် မြိုမချသေးဘဲ ထွန်းထွန်းမှ ဆက်လက်ကွင်းထုချသည်ကို ပါးစပ်ဟကာ စောင့်သည်။ ထွန်းထွန်းလီးရည်များ ပါးစပ်ထဲ တဗျစ်ဗျစ်ဝင်လာသည်။ သူမ ထွန်းထွန်းကို မျက်လုံးပင့်ကြည့်ပေးသည်။ ထွန်းထွန်းကလည်း သူမကို ငုံ့ကြည့်သည်။ နှုတ်ခမ်းစွန်းတွင် ပေသွားသော လီးရည်ကို လက်ညိုးဖြင့် သပ်ကာ စုပ်လိုက်သည်။ လက်ဝါးနှစ်ဖက်ထဲသို့ လီးရည်ကို ထွေးထုတ်သည်။ ထွန်းထွန်းလီးတွင် သုတ်လိုက်သည်။ ပြီးမှ လျှာနဲ့ ပြောင်အောင် လိုက်လျက်ပေးသည်။ လီးရည်များ ပြောင်သွားတော့ ထွန်းထွန်းလီးက ငိုင်ကျမလိုလို ဖြစ်ပြီးမှ ပြန်တောင်လာသည်။ ထွန်းထွန်းက သူမကို မတ်တတ်ရပ်ခိုင်းရင်း နမ်းကာ နို့များကို ကိုင်သည်။ တင်းနေတုန်းပဲ၊ ထပ်ဆွဲမယ်နော် ထွန်းထွန်းက သူမနို့ကိုကိုင်ရင်း ပြောသည်။ သူမကိုယ်ကိုလည်း ဆွဲလှည့်သည်။ စားပွဲကို လက်ထောက်ခိုင်းသည်။ ဘယ်ပေါက်ကြိုက်လဲ ရှေ့ပေါက်ကို အရင်သွင်းပါနော် သူမ ဖြေပေးလိုက်သည်။ မာတောင် စေးထန်းနေသော လီးကြီး သူမအဖုတ်ထဲ မြုပ်ဝင်သွားပြန်သည်။
နှစ်ယောက် တစ်အိပ်မက်ကို ပုံစံပေါင်းစုံဖြင့် ဆွဲကြသည်။ ထိုအိပ်မက်ကို ဖျက်ဆီးလိုက်သော သူများက သူမသင်တန်းတွင် ရှိသော လက်ထောက်ဆရာမလေး နှစ်ဦးဖြစ်သည့် မိုးယုနှင့် ဝတ်မှုံတို့ဖြစ်သည်။ ထွန်းထွန်းကံကောင်းသည်လား။ သူမထံတွင် မျှဝေခံစားရမည့် ကံပါလာသည်လားတော့ မပြောတတ်။ ဆရာမ ကိုချောင်းနေတာ ကြာပြီ ဟိဟိ သမီးလည်း ပါမယ်နော် ဆရာမ သမီးကတော့ ကြည့်ရုံပဲ စားလို့ မဝသေးခင် ခွဲစားရသည်ကို မကျေနပ်သော်လည်း မတတ်နိုင်ပါ။ မိုးယုကတော့ မပါဟု ပြောသည်။ ဝတ်မှုံကတော့ ပါမည်တဲ့။ မိုးယုကော ဘယ်လောက် ကြာကြာ ခံနိုင်မှာမို့လို့လဲလေ။ ထပ်သွင်းပေးဦး ဝတ်မှုံက သူမစောက်ဖုတ်ထဲမှ လီးကို ဆွဲထုတ်လိုက်သော ထွန်းထွန်းကို အားမလို အားမရ လှမ်းပြောသည်။ သူ့အလှည့်လေ မြန်မြန်သွင်းလေ ကျော်ကျော်က ဖွေးနုလွန်းလှသော အသားအရေပိုင်ရှင် ဖြစ်သည့် ဝတ်မှုံအလှကို ငေးကြည့်ရင်း ထွန်းထွန်းဖောက်လိုက်စဉ်က မိုးပျက်လုမတတ်အော်ခဲ့ရသော သူမစောက်ဖုတ် မို့မို့လေးပေါ် လီးထိပ်ကို တေ့လိုက်ရင်း မလိုးရက်သလို ဖြစ်သွားမိသည်။
သွင်းလေ ကျော်ကျော့်အား ခိုင်နှင်းကို ဆက်သွင်းနေသော ထွန်းထွန်းက ပခုံးပုတ် အသိပေးသည်။ ဝတ်မှုံမှာ ဆရာမနှင့် ကျော်ကျော်တို့ လိုးနေသည်ကို သုံးရက်ဆက်တိုက် ချောင်းကြည့်ခဲ့သည်။ မြင်ပြီးသည့် နေ့နောက်ပိုင်း ဘယ်လိုမှ နေလို့မရတော့။ စောက်ပတ်တစ်ခုလုံး ရွနေသည်။ မိုးယုကို အဖော်ခေါ်တော့ မိုးယုက ကြောက်နေသည်။ အဆောင်ပြန်ရောက်လျှင် ညအိပ်ရာဝင်ပြီးနောက်ပိုင်း အများအိပ်သွားလျှင် ကိုယ့်အဖုတ်ကို အသာလေး ညဝတ်ဘောင်းဘီထဲ လက်သျိုကာ ခိုးပွတ်ကြည့်သည်။ ကျော်ကျော်လီးကို မြင်လိုက်၊ ထွန်းထွန်းလီးကို မြင်လိုက် ဖြစ်နေသည်။ လီးကြောကြီးများ ထိုးထိုးထောင်ထောင်နှင့် ခိုင်နှင်းစောက်ဖုတ်ထဲ မြုပ်မြုပ်သွားသည်ကို မြင်မိပြန်တော့ ကြက်သီးလေးများပင် ထသည်။ ခိုင်နှင်းအားပါးတရ စုပ်ပေးနေသည်ကို မြင်ပြန်တော့ တံတွေးမြိုရ ခက်ပြန်သည်။ ကုတင်ဘေးရှိ စမ်းလိုက်သောအခါ ဘောလ်ပင်ကို တွေ့သည်။ ဘောလ်ပင်ကို ငုံကြည့်သည်။ တစ်ဖက်က ဘောလ်ပင်ငုံ တစ်ဖက်က အဖုတ်ကို ပွတ်ကစားသည်။ တစ်ရက်ထက် တစ်ရက် စောက်ဖုတ်က ပိုဆာလာသည်။ နို့တွေ ပိုတင်းလာသည်။
နို့သီးကို ခိုးချေကစားရသဖြင့် လက်တွေတောင် နာသည်။ သို့သော် အာသာ မပြေပါ။ ထို့ကြောင့် အရဲစွန့်လိုက်သည်။ တိုက်ဆိုင်သည့် ထူးခြားမှုတစ်ခုက ရှိနေပါသေးသည်။ ယနေ့ ဘာနေ့ဆိုလား မသိ။ ကွန်ပျူတာ သင်တန်းပိတ်သည်။ သို့သော် ကျောင်းသားနှစ်ယောက်တက်မည်။ ဆရာမသုံးယောက်တက်မည်။ မိုးယု ငြင်းနေသော်လည်း ဝတ်မှုံက အတင်းခေါ်သည်။ မိုးယုက အတွင်းခံသုံးထပ်လောက်ဝတ်နေသည်။ ဘော်လီကြိုးကို ခိုင်အောင်ဝတ်သည်။ ဝတ်မှုံကတော့ မဝတ်ချင်။ သို့သော် ဟန်အဖြစ် ဝတ်သွားသည်။ အလှပြင်နေတာ ကြာတော့ မိုးယုကပင် ငေါက်သေးသည်။ နင် မင်္ဂလာပွဲတက်တာ မဟုတ်ဘူးနော်၊ အဲလောက် ပြင်မနေနဲ့၊ ဟိုက နင့်စောက်ဖုတ်ကိုပဲ ဂရုစိုက်မှာ၊ အလိုးခံဖို့ သွားတာများ မင်္ဂလာပွဲတက်တာ ကျနေတာပဲ မင်္ဂလာပွဲလည်း အလိုးခံဖို့ ကြေငြာတာပဲ မဟုတ်လား မိုးရယ် တော်စမ်းပါ နင်တော်တော် ခံချင်နေ ဟုတ်လား နှုတ်ခမ်းနီဆိုးနေရင်း လီးထိပ်ကြီးကို မြင်ယောင်သဖြင့် ကြက်သီးပင် ထသွားသေးသည်။ ဟိုရောက်တော့ ကျော်ကျော်နှင့်ထွန်းထွန်းက နောက်ကျနေသည်။
ဆရာမကတော့ ဝတ်မှုံထမီကို ပင့်ကာ အပေါ်မှ အဖုတ်ကို ပွတ်သည်။ မိုးယုက တစ်နေရာတွင် ရှောင်သည့်သဘောဖြင့် ကွန်ပျူတာ တစလုံးဖွင့်ကာ စာထိုင်ရိုက်နေလိုက်သည်။ မမတောင် လုပ်ငန်းစနေပြီ ထွန်းထွန်းက ရောက်မဆိုက် ပြောသည်။ ဘေးတွင် ထိုင်ချကာ အင်္ကျီကြယ်သီးကို ဖြုတ်လိုက်ပြီး ဘရာကြိုးကို ပခုံးမှ ဆွဲဖြုတ်သည်။ ဆရာမ ကျွန်တော် သူ့ကို အရင်ဖိုက်လိုက်မယ် မရဘူးဟေ့ကောင် ငါလည်း အသစ်လေးကိုတော့ အရင်ဖိုက်ကြည့်ချင်သေးတယ် တော်ကြစမ်း မင်းတို့ ဒါကိုပဲ ငြင်းနေကြမယ်ဆိုတာ ငါသိတယ်၊ ဒီတော့ ငါဆုံးဖြတ်ထားသလို မင်းတို့ လိုက်နာရမယ်၊ တစ်ယောက်က ပါကင်ဖောက်မယ်၊ ပါကင်ဖောက်ဖောက်ပြီးချင်း ပြန်ထုတ်ရမယ်၊ နောက်တစ်ယောက်က တစ်မိနစ်ဆွဲမယ်၊ ပြီးရင် ငါးမိနစ်စီဆက်ဆွဲမယ်၊ သဘောတူရင် မင်းတို့ထဲက ဘယ်သူပါကင် ဖောက်မလဲ ဒါပဲ၊ လောလောဆယ် ငါစမ်းကြည့်သလောက်တော့ ပါကင်က လုံးဝမဖောက်ရသေးတဲ့ အသစ် ကျွန်တော်ဖောက်မယ် ကျွန်တော်ဖောက်မယ် ကျော်ကျော်နှင့်ထွန်းထွန်းတို့ ဆုံသွားကြသည်။
တစ်ယောက်တည်းပဲ ပြောပါ ထွန်းထွန်းနှင့် ကျော်ကျော် တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်သည်။ ကဲ သူ့စောက်ဖုတ်ကို အရင်လျက်သူ ဖောက်ရမယ် ကျွန်တော်လျက်မယ် ကျွန်တော်လျက်မယ် ဟွန်း…. ဆရာမက သူတို့နှစ်ယောက် မျက်နှာကို စေ့စေ့ကြည့်သည်။ အသစ်တွေ့တော့ အဟောင်းကို မေ့ကုန်ကြပြီပေါ့လေ မဟုတ်ပါဘူး မဟုတ်ပါဘူး မမရယ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ သည်လိုဆိုတော့လည်း အပြိုင်ငြင်းကြသည်။ ရလေ လိုလေအိုတစ္ဆေပေါ့လေ။ ခိုင်နှင်း စိတ်ထဲ မကျေမနပ် ဖြစ်မိသော်လည်း နောက်ထပ် အရသာတမျိုးကို မျှော်လင့်မိသဖြင့် ကြိတ်ဝမ်းသာမိသည်။ သူမက အကြီးမို့ သူမကသာ ဆုံးဖြတ်ပေးရတော့မည်။ ထွန်းထွန်းက နောက်မှ ရောက်လာတဲ့သူဆိုတော့ ထွန်းထွန်းဖောက်လိုက်၊ ဖောက်ဖောက်ပြီးချင်း ပြန်ထုတ်ရမှာနော်၊ လျက်တာကတော့ နှစ်ယောက်လုံး လျက်ကြ အဝတ်ကိုဆွဲချွတ်လိုက်ကြပြီးနောက် ကိုယ်လုံးတီးဖြစ်သွားတော့ တမျိုးခံစားရသည်။ ယောကျာ်းနှစ်ယောက်၏ တစ်ဖက်စီမှ ကြမ်းရှသော အနမ်းများနှင့် အကိုင်အတွယ်များကြောင့် ဝတ်မှုံမှာ ကော့နေသည်။
ပေါင်ကြောနှင့် စောက်ဖုတ်ကို ပွတ်ရင်း နို့ကို စုပ်ကြတော့ သူမ မူးမိုက်မတတ် ခံစားရသည်။ စောက်ဖုတ်ကို တစ်လှည့်စီလျက်တော့ သူမမှာ ငိုမဲ့မဲ့လေး ဖြစ်နေမိသည်။ လက်များ ငြိမ်ငြိမ်ထား၍ ရသော်လည်း ခြေကို ငြိမ်ငြိမ်ထားမရ။ လှုပ်ရမ်းနေသည်။ ဝတ်မှုံမှာ အလျက်ခံရတုန်းကတော့ ကောင်းပြီး စုပ်ပေးရမည်ဆိုတော့ တွန့်သွားသည်။ သူမဘယ်ဖက်တွင် တချောင်း ညာဘက်တွင် တချောင်းကိုင်ထားသော လီးကို ကွင်းသာ ထုပေးနေမိသည်။ ခုထိ မစုပ်ရဲသေး။ မြန်မြန်စုပ်လေ ထွန်းထွန်းကတော့ ထုံးစံအတိုင်းပင် ခပ်မြန်မြန် ဖြစ်နေသည်။ သူမလည်း မထူးတော့ပြီ။ စောင့်နေလျှင် ကြာရုံသာ ရှိမည်မှန်းသိသဖြင့် ချောင်းကြည့်ဖူးသည့် အကြိမ်တိုင်း ဆရာမစုပ်ပေးနေကျလို အာခေါင်ထိငုံချလိုက်သည်။ စုပ်မယ့် စုပ်တော့လည်း ဆရာမကြီး အထာနဲ့ပါလား၊ အသစ်သာဆိုတယ် ကျွမ်းသလိုလိုပဲ သူမက ကြားသော်လည်း မကြားဟန်ပြုကာ ထွန်းထွန်းလီးစုပ်ပြီး ကျော်ကျော်လီးကို စုပ်လိုက်သည်။ ၁၂ နာရီကျော်နေပြီ၊ ငါဗိုက်ဆာပြီ ခံလို့ဖြင့် အားမရသေးချိန်တွင် အဖျက်မလေး မိုးယုက ဝင်လာသည်။
ဟုတ်တော့ ဟုတ်ပါသည်။ မနက် ၈ နာရီကတည်းက သူတို့ လိုးနေကြသည်။ ပထမချီဘယ်ချိန်ပြီးလိုက်မှန်း မသိ။ အပျိုစင်ဘဝလည်း ဘယ်လို ကုန်သွားမှန်း မသိပါ။ ကျော်ကျော်နှင့် ထွန်းထွန်းလည်း ဆေးစားထားသည် ဟုဆိုသည်။ သူမမှာလည်း ခံနည်းတွေ နည်းနည်း သိသွားသည်။ ဆရာမကလည်း သင်ပေးသည်။ ဖင်ကို တောင်းလိုးကျသော်လည်း ဝတ်မှုံက နောက်တစ်ပတ်လောက် စောင့်ခိုင်းသည်။ မိုးယုလာခေါ်ချိန်မှာ ထွန်းထွန်းက သူမကို လေးဘက်ထောက်ခိုင်းပြီး နောက်မှ လိုးနေခြင်း ဖြစ်သည်။ သူမမှာ မနက်ကတည်းက ခံနေရသောကြောင့် လေးဘက်မထောက်နိုင်တော့ဘဲ ရှေ့ကို ငိုက်စိုက်ကျနေသည်။ ကျော်ကျော်က တစောင်းလိုက် ခိုင်နှင်းဖင်ကို ဆော်နေသည်။ ပြီးတော့မယ် ခဏ ထွန်းထွန်းက ပြောသည်။ မိုးယုလည်း အောင့်သာ နေနေသည်။ လိုးသံတွေက ဆူညံနေသည်မို့ စိတ်က ခပ်ပါပါ ဖြစ်နေသည်။ သို့သော် ကောင်းကောင်းပင် မညည်းနိုင်တော့သော ဝတ်မှုံကို ကြည့်ကာလည်း လန့်မိသည်။ကွန်ပျူတာ သင်တန်းခန်းမတစ်ခုလုံးကို ပုံစံပြောင်း၍ ခန်းမတွင် အတွင်းခံဘောင်းဘီသာ ဝတ်ထားကြသော။
ဆက်နောင်၏ဘေးတွင် ဘသက်၊ ချစ်မောင်၊ ရဲလွင်နှင့် စိုးအောင်တို့ တစ်ဘက်နှစ်ယောက်စီ ဆိုဖာဆက်တီခုံတွင် ထိုင်နေကြသည်။ ဘေးတွင် မိသားစုအိပ် ဆိုဖာကုတင်ကြီးတစ်လုံး ရှိသည်။ စားပွဲခုံနှစ်ခုံ ရှိသည်။ စားပွဲ တစ်လုံးပေါ်တွင် လိုးဖို့အသုံးပြု၍ ရသည့် ကြိုးများ၊ လည်ပတ်များ၊ လီးတုများနှင့် စုံစိစွာ ရှိနေသည်။ ဗွီဒီယိုကင်မရာ ဒေါက်တိုင်တစ်ခုမှ ဗွီဒီယိုကင်မရာက ရကော့ မီးနီလေး ပြနေသည်။ တိုက်ရိုက်ပြသော ကွန်ပျူတာ တစ်လုံးရှိသည်။ ဘေးတွင် အသံတိုးတိုးဖြင့် အင်္ဂလိပ်ကားနှင့် အာရှကားများ ပြနေသော ကွန်ပျူတာ နှစ်လုံးရှိသည်။ ဒေါ်ခိုင်နှင်း ကြွပါခင်ဗျာ ဒေါင့်တစ်နေရာတွင် အလှပြင်ပစ္စည်းများ၊ အဝတ်အစားများထားသည့် အခန်းကို လိုက်ကာဖြင့် ဖွဲ့ထားပေးသည်။ ထိုထဲတွင် ခိုင်နှင်း၊ ဝတ်မှုံနှင့် မိုးယုတို့ရှိသည်။ ထိုထဲမှ ခိုင်နှင်း ထွက်လာသည်။ ခိုင်နှင်းသည် မြန်မာ့ရိုးရာ ပွဲတက် ဝတ်စုံလေး ဝတ်ထားသည်။ ခင်းထားသော ကော်ဇောအတိုင်း လမ်းလျှောက်လာသည်။ အပြာရင့်ရင့် ဝတ်စုံနှင့် ဆံပင်များကို ထုံးနှောင်ထားသည်။ မဟာနဖူးမှာ ထင်းနေသလို ရင်မှာလည်း တင်းနေသည်။
ကိုယ်ကို တစ်ပတ်လှည့်ပြသောအခါ တင်မှာလည်း လုံးကျစ်နေသည်။ သူတို့ငါးယောက်က ဝိုင်းဖွဲ့၍ စားမတတ် ကြည့်နေမိသည်။ ခိုင်နှင်းမှာ ယောကျာ်းများကို စိတ်ကြိုက်ကစားခဲ့သမျှ ယခုတော့ ဝဋ်လည်လေပြီ။ သူမ တစ်ကိုယ်လုံး ပေါင်းတင်ရင်း ဝတ်မှုံနှင့် မိုးယုကို ချော့ရသည်။ အလှပြင်သည်။ ဝတ်စုံများ ဝယ်သည်။ အားဆေးများ ဝယ်ကာ ကျွေးသည်။ ပြန်ရောက်တော့ အခန်းက ပုံစံပြောင်းနေသည်။ စားပွဲပေါ်တွင် လီးတုများ၊ ပါးစပ်ပိတ်ဘုလုံးများ၊ ကြိုးများ၊ လည်ပတ်များစသည့် ဆက်စပ်ပစ္စည်းများကို တွေ့ရတော့ ကြက်သီးနည်းနည်း ထမိသည်။ ခိုင်နှင်းသည် ခိုင်းသည့် အတိုင်း တဝေမသိမ်း လိုက်နာရသည်။ သူမဆီးစပ်တွင် လိပ်ပြာရုပ် စတေကာ ကပ်သည်။ မိုးယုတွင် နှင်းဆီရုပ် စတေကာ ကပ်သည်။ ဝတ်မှုံတွင် အသည်းကွဲရုပ် စတေကာ ကပ်သည်။ ခဏ ခဏငိုကြသော ဝတ်မှုံနှင့် မိုးယုကိုလည်း ချော့ရသည်။ ခိုင်နှင်းသည် မြန်မာ့ရိုးရာ ဝတ်စုံဖြင့် ဝတ်ကာ သကောင့်သားများကို အပြင်ပန်း အလှပြသည်။ ကြည့်ရသည်မှာ သူမ မျက်နှာတွင် ပြုပြင်မွမ်းမံရသော အလှအပများကို မြင်ဟန်မပေါ်ကြပါ။
အဖြူရောင် အတွင်းခံများသာ ဝတ်ထားကြသော ဆက်နောင်တို့ ငါးယောက်သည် သူမတင်ဆီကိုသာ အာရုံရောက်နေကြသည်။ ဝတ်မှုံကြွပါ ဝတ်မှုံကလည်း မြန်မာ့ရိုးရာ ဝတ်စုံအနီအစင်းလေး ဝတ်လာသည်။ အထင်တွင် အမည်းရောင်လေး ဖြစ်နေသည်။ သူမလည်း ဆံပင်ကို နောက်သို့ စီးထားသည်။ မဟာနဖူးပြင်ကို ရင်နှင့် တင်နဲ့ လိုက်ဖက်အောင် ပြောင်နေအောင် ထားသည်။ ဖြည်းဖြည်းချင်း လျှောက်ပြီး ကိုယ်ကိုလှည့်ပြသည်။ သူတို့ ဘယ်လောက် လိုးနိုင်မှာလဲ၊ သူတို့ ငါးယောက် လီးငါးချောင်းပဲပါတယ်၊ ဘယ်သူမှ လီးနှစ်ချောင်း မပါဘူး၊ ငါတို့ သုံးယောက်ကို တစ်ရက်တည်း အချီ နှစ်ဆယ်သူတို့ မဆွဲနိုင်ပါဘူး၊ ဆွဲနိုင်လည်း မိန်းကလေးက အနိုင်ချည်းပါ၊ စစ်သား နှစ်ရာကို မိန်းမတစ်ယောက်နဲ့ ထိန်းတဲ့ ပုံပြင်တွေ သိတယ် မဟုတ်လား တင်ကို ပစ်ပြီး လျှောက်လမ်းဘေးတွင် ရပ်နေလိုက်တော့ ဆက်နောင်၏ မိုးယုကို ခေါ်သံကြားရသည်။ မိုးယုက ကြက်သွေးရောင် ဝမ်းဆက်လေး ဝတ်လာသည်။ ထမီစွန်းနဲ့ အင်္ကျီစွန်းတွင် ပန်းပွင့်လေးပါသည်။ နဖူးကို ပေါ်အောင် ဆံပင်များကို သပ်တင်ကာ ဆံညှပ်ဖြင့် ညှပ်ထားပြီး ဆံနွယ်များကို ဘေးနှစ်ဖက်သို့ ချထားသည်။
သူမလည်း တင်ကို ပြကာ ရပ်နေလိုက်သည်။ နည်းနည်းလေး ကုန်းကြပါ ခိုင်နှင်းက ခါးလေးနည်းနည်းကိုင်းကာ ကုန်းပေးသည်။ မိုးယုနှင့် ဝတ်မှုံလည်း ခိုင်နှင်းလုပ်သဖြင့် လိုက်လုပ်သည်။ ရပြီ ပြန်မတ်လိုက်ပြီး တစ်ပတ်လှည့်ပြ၊ ပြီးရင် သွားတော့ ဆက်နောင်တို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ဆုပ်ကိုင်ထားရင်း တီးတိုး သဖန်းပိုး ထိုးကြသည်။ ဘသက်အသံက ပိုကျယ်သည်။ အိုးတွေကတော့ စစ်ကိုင်းအိုးတွေချည်းပဲ၊ အိုးစိမ်းကတော့ ပိုအယ်တယ် ဒီကောင် ကွင်းတောင် ထုနေပြီ ဟဟ အနီးရှိ ချစ်မောင်က လှမ်းပြောသဖြင့် ဘသက်က သူ့ဟာကို အတွင်းခံထဲ မရမက ပြန်သိပ်ထည့်သည်။ ဆက်နောင် အသံက လိုက်ကာ တစ်ဖက်ရှိ အလိုးတော်ခံရန်စောင့်နေသော မမသုံးယောက်ထံသို့ ရောက်လာသည်။ မမသုံးယောက်က တစ်ယောက်မျက်နှာ တစ်ယောက်ကြည့်လိုက်ကြသည်။ စောဒက တက်ခွင့်မရှိသည့် အခြေအနေ။ မိုးယု ထွက်လာခဲ့ပါ၊ တစ်ယေက်တည်းပေါ့ သစ်သီးတို့တွင် မှည့်သည့်အသီးက စားကောင်းသော်လည်း မိန်းကလေးတို့တွင် စိမ်းသည့်အသီးက ပိုကောင်းသည် မဟုတ်ပါလား။
မိုးယုတစ်ယောက် ခြေလက်များ နည်းနည်းအေးစက်နေသည်။ လျှောက်၍သာ သွားလိုက်ရသည်။ ဘယ်ကနေ ဘယ်လို ရောက်သွားသည် မသိ။ ကိုယ့်ဘေးနားလေး လာထိုင်ပြီး ဟိုကားထဲမြင်နေရသလိုလေး ကိုယ့်ဟာကို မှုတ်ပေးပါဦး မိုးယုသည် တံတွေးသီးသွားသည်။ အမိန့်ကိုလည်း လွန်ဆန်လို့ မဖြစ်နိုင်တော့။ ဆက်နောင် ဘေးတွင် ထိုင်ကာ ဆက်နောင်၏ အတွင်းခံကို ချွတ်လိုက်သည်။ ရဲလွင်က သူမနို့ကို လာစမ်းသည်။ စိုးအောင်က သူမခြေသလုံးကို ပွတ်သည်။ ဆက်နောင်လီးကြီးသည် ဖီးစိမ်းငှက်ပျောသီးလီးကို ကောက်နေသည်။ အကြောများ ပြိန်းပြိန်းထနေသည်။ လီးလုံးကို ကိုင်ကာ လျှာဖျားဖြင့် လီးထိပ်ကို ဝိုင်းပေးလိုက်သည်။ ဝူး ကျွမ်းသားပဲ ဘေးမှ ကြည့်နေသော ဘသက်က ပြောသည်။ နောက်မှ အင်္ကျီကို ချွတ်နေကြသည်။ သူမ ရှေ့ကိုသာ မဲလျက်ပေးနေလိုက်သည်။ စိုးအောင်ထင်ပါသည်။ သူမတင်တစ်ခြမ်းကို ဖွဖွကိုက်သည်။ ဘသက်နဲ့ ချစ်မောင်လည်း ထလာသည်။ သူမ ဒဲ့နေကာ လီးကို စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ဆက်နောင်က လီးကို ကိုင်ပြီး ပင့်ထားသဖြင့် ဂွေးစေ့များကို တစ်လုံးစီငုံသည်။
ငုံးဥပြုတ်ပူပူလေး မိုးယု၏ လက်နှစ်ဖက်ကို တစ်ယောက်ယောက်က နောက်သို့ ဆွဲသိမ်းထားသဖြင့် လီးကို မကိုင်ရဘဲ စုပ်ပေးရသည်။ လီးကြောကြီးကို လျက်သည်။ လပြွတ်ကို တစ်လုံးစီငုံခိုင်းသဖြင့် ငုံသည်။ နို့ကို တစ်ယောက်တစ်လုံးကိုင်ကာ နုအိနေတာပဲ အယ်ချက်ကတော့ ကန်းကုန် တင်းတယ်နော် နို့သီးကိုင်ကြည့် တော်တော်မာတယ် စသဖြင့် ပြောနေကြသည်။ နောက်မှ တင်ကို ဖြဲပြီး စောက်ဖုတ်ကို ကစားနေကြသူကလည်း ခုနက အလိုးခံထားရပေမယ့် စောက်ဖုတ်ကတော့ လန်းလန်းလေးပဲ ဟေ့ကောင်ရေ စောက်စေ့က ရဲတွတ်နေတာနော် ဟေ့ စောက်စေ့ကို ငါကလိမယ် ငါ လျက်မယ်ကွာ၊ လျက်ချင်စရာလေး တင်ကို ငါဖြဲထားပေးမယ် ငန်တယ်ကွ ထွီ ဟုတ်လောက်ပါဘူးကွာ ငါလျက်ကြည့်မယ် အလကားပြောတာ ငါဆက်လျက်မယ် တစ်ယောက်တစ်ပေါက်နှင့် လုပ်နေကြသည်။ မိုးယုသည် ဆက်နောင်ကို ခွလိုက်သည်။ သေချာကြည့်ကြရအောင် ဟုဆိုကာ ကျန်လေးယောက်က အောက်ကို ငုံ့ကြည့်ကြသည်။ မိုးယုက မာထန်နေသော ဆက်နောင်လီးကို ကိုင်လိုက်ပြီး စောက်ပတ်အက်ကြောင်းတွင် တေ့လိုက်သည်။
စောက်ပေါက်ကျဉ်းကျဉ်းနဲ့ လီးကြီးကြီးဇာတ်လမ်း စပါပြီခင်ဗျာ တစ်ယောက်က ပြောသည်။ ကိုယ်တိုင်သွင်းမယ့် ဇာတ်လမ်းခင်ဗျ တစ်ယောက်က ပြောပြန်သည်။ ကာမစိတ်ကြွဆေးသောက်ထား၍သာ မိုးယုတစ်ယောက် မွန်နေခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ကတော့ မလွယ်ပါ။ လီးထိပ်ကို စောက်ပတ်အက်ကြောင်းတွင် ရှေ့နောက်မွှေပြီး ထိုင်ချလိုက်သည်။ ခုနက သူမအလိုမတူဘဲ ဆောင့်လိုးခဲ့စဉ်က ဘာမှန်းမသိခဲ့သော်လည်း ခုတော့ နာသည်။ သို့သော် သူမအားစိုက်ကာ ဆောင့်ထိုင်ချသည်။ လီးလုံးကြီးမှာ သူမအဖုတ်ထဲ တဖြည်းဖြည်း မြုပ်ဝင်နေသည်။ အ.. တစ်ဝက်လောက်ရောက်တော့ သူမခဏ ပြန်ထုတ်သည်။ သို့သော် ဆေးအစွမ်းကြောင့် စိတ်က ကြွနေသည်။ ပြန်ဆောင့်ချသည်။ အိုး……. ဆုံးအောင် မြုပ်ဝင်သွားတော့ ဆက်နောင်က အော်သည်။ မိုးယုက ရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်ပေးသည်။ ဆက်နောင်သည် မိုးယု၏ တင်ကိုဆုတ်ကိုင်ကာ အသာလေး ဆက်လုပ်ခိုင်းသည်။ မျက်လုံးမှိတ်ကာ အပြည့်ခံစားသည်။ မိုးယုက ဆက်လက်၍ ဆောင့်ချသည်။ တပွက်ပွက်မြည်နေသည်။ ကျန်လေးယောက်မှာ အံ့အားသင့်နေသည်။
ဆက်နောင်က မိုးယုတင်လုံးကို ကျစ်ကျစ်ပါအောင်ဆုတ်ကာ သူကလည်း ဆောင့်တက်သည်။ အားလုံးပိုဆာလာကြသည်။ ဘသက် ပြင်ထား ဘသက်က ဘေးတွင် ပက်လက်လေးဖြစ်အောင်နေကာ လီးကို ထောင်နေအောင် ကိုင်ထားသည်။ ကဲ သူ့ပေါ်တက် ဆက်နောင်က မိုးယုတင်လေးကို ပုတ်လိုက်ပြီး ပြောင်းခိုင်းသည်။ မိုးယုက ဘသက်ပေါ်တက်ဆောင့်သည်။ အိုး .. အား အိုး… ဘသက်လက်ကို နောက်သို့ချိတ်ကာ မိုးယုရှေ့တိုးနောက်ဆုတ်လုပ်သည်ကို ငြိမ်ခံသည်။ မိုးယု ဆောင့်ချပြီ။ တပွက်ပွက်နဲ့ မြည်သည်။ မိုးယုနို့အုံလေး အထက်အောက်လှုပ်ခါနေသည်။ ဆံပင်များလည်း ဝဲလွင့်နေသည်။ ဘသက်က မိုးယုနို့ကို လှမ်းကိုင်သည်။ ခဏကြာတော့ မိုးယုမှ ကျန်သုံးယောက်ဆီသို့ တက်ကာ ဆောင့်ရသည်။ ချွေးများပင် စို့နေသည်။ မင်းက ဒီနားမှာပဲ အနားယူလိုက်ဦး၊ ဟေ့ကောင်တွေ ပါးကို ဝအောင်နမ်း၊ နို့ကို ဝနေအောင် ကိုင်ကြပေါ့၊ ကဲ အခန်းထဲက ဝတ်မှုံကြွပါ ဝတ်မှုံတစ်ယောက် ကြောက်ကြောက်နဲ့ ထွက်လာသည်။ သူမတစ်ကိုယ်လုံး ရှိန်းဖိန်းနေသည်။
ကိုယ်ကို တစ်ပတ်လှည့်ပြပါဦး ဝတ်မှုံသည် ဘေးသို့ တစ်ချက်စောင်းငဲ့ကြည့်တော့ မိုးယုကို ရဲလွင်နှင့်စိုးအောင်က အငမ်းမရ နမ်းနေကြသည်။ နို့ကိုလည်း ပင့်ချေကိုင်ထားကြသည်။ ဝတ်မှုံသည်ကိုယ်ကို တစ်ပတ်လှည့်လိုက်သည်။ ကျောကိုပြပြီး အင်္ကျီကို ချွတ်ချသည်။ ထမီကို ချွတ်ချသည်။ ဘော်လီနဲ့ စပင်ဒါကိုလည်း တစ်ပါတည်း ချွတ်လိုက်သည်။ နောက် ကိုယ့်အဖုတ်ကို ကိုယ်အုပ်ထားကာ ပြန်လှည့်ပေးသည်။ မောင်တော်တို့ လီးနဲ့ မတွေ့ရသေးတဲ့ မင်းရဲ့ အဖုတ်ကို ကုန်းပြီး ဖြဲပြပေးပါဦးလား သခင်မဖုရား ဆက်နောင်က သရော်သလိုလို ပြောသဖြင့် ဝတ်မှုံက လှည့်ကုန်းကာ တင်ကို ဖြဲပြရသေးသည်။ လန်းတော်မူတယ် မဟုတ်လား မောင်မင်းတို့ ဆက်နောင်က ရယ်ကာ ပြောသည်။ မင်းရဲ့ အဖုတ်ကနေ တစ်ဆင့် မင်းရဲ့ သားအိမ်ကို ထိုးမွှေပြီး မင်းကို နတ်ပြည်ပို့ပေးမယ့် ဟောဒီမောင်ရဲ့ လီးကို စုပ်တော်မူပေးပါဦး သခင်မဖုရား ဝတ်မှုံသည် ဘသက်နှင့် ချစ်မောင်လီးကို တစ်ဖက်စီကိုင်ကာ ဆက်နောင်၏ လီးကို စုပ်ပေးသည်။ ခဏသာ စုပ်ခွင့်ပေးသည်။ နောက်လှည့်၍ ဆောင့်ချပေးရသည်။
ဝတ်မှုံလည်း တစ်ယောက်စီ နောက်လှည်ပြီး ဆောင့်ချပေးရသည်။ ပြီးနောက် ဘသက်နှင့် ချစ်မောင်၏ အနမ်းများအောက် ခဏနားသည်။ နှုတ်ခမ်းများကို စုပ်သည်။ နို့များကို ကိုင်သည်။ ဆက်နောင်က ခိုင်နှင်းကို ခေါ်သည်။ ခိုင်နှင်းရောက်လာပြီး ဆက်နောင် လီးကို စုပ်သည်။ ပြီးလျှင် ပေါင်တစ်ဖက်ခွပြီး ထိုင်ကာ ဆောင့်ချပေးသည်။ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက်ပေါ် ဆောင့်ချရသည်။ ကုတင်ပေါ်သို့ မချောသုံးယောက် ပက်လက်ကလေး အိပ်သည်။ စိုးအောင်၊ ဘသက်နှင့် ရဲလွင်က စောက်ပတ် အသီးသီးသို့ သူတို့လီးကို ချိန်လိုက်သည်။ တပြိုင်နက် ဆောင့်ချသည်။ နောက် ပြိုင်တူဆွဲသည်။ ခိုင်နှင်းက သိပ်မအော်သော်လည်း မိုးယုနှင့် ဝတ်မှုံကတော့ အော်ကြသည်။ သို့သော် ကောင်းကောင်းတော့ အော်လို့မရ။ ဆက်နောင်နှင့် ချစ်မောင်က သူတို့ပါးစပ်ထဲ လီးကို သိပ်ထည့်ထားကြသည်။ ဇာတ်သိမ်းတော့ ခိုင်နှင်းကို လက်နောက်ပစ်ထား ဒူးထောက်ကာ နေခိုင်းသည်။ မျက်နှာမော့ပြီး ပါးစပ်ဟထားသည်။ ဘသက်က ခပ်သွက်သွက် ကွင်းထုချသည်။ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် ကွင်းထုချသည်။
ခိုင်နှင်း ထွေးထုတ်သမျှ ရင်ဘတ်ပေါ်တွင် ပေကျံနေသည်။ မျက်ခုံးမွေးပေါ် ပါးပေါ် နှာတံပေါ်တွင်လည်း လီးရည်များ ပေကျံနေသည်။ ထပ်သွင်းပေးဦး ခိုင်နှင်းတစ်ယေက် ထိုကဲ့သို့ မပြောနိုင်။ ကြီးမားတုတ်ခိုင်လှသော ဘသက်လီးပေါ် သူမစောက်ဖုတ် သိပ်ထည့်ထားရသည်။ ဘသက်က ခေါင်းအုံးလေးပေါ် အုံးကာ ပက်လက်လေး ကြမ်းပေါ် အိပ်နေသည်။ သူမ ဖင်ပေါက်ထဲသို့ ရဲလွင်၏ ရှည်ရှည်မဲမဲနှင့် အကြောပြိုင်းပြိုင်းထကာ ကြောက်စရာကောင်းသော လီးက မြုပ်ဝင်ကာ ချီးအိမ်ထိအောင် တဒုတ်ဒုတ်ဆောင့်နေသည်။ ချစ်မောင်နှင့်စိုးအောင်က ဒူးထောက်ကာ သူမကိုယ်ကို တစ်စောင်းဆွဲပြီးလျှင် ပါးစပ်ထဲသို့ တစ်ယောက်တစ်လှည့်စီ ထည့်ကြသည်။ အောက်မှ ဆောင့်တက်လိုက်၊ နောက်မှ ဖိလိုးလိုက်ကြားမှ ချစ်မောင်က သူမမေးစေ့ကိုဆွဲကာ လီးကို အာခေါင်စိုက်အောင် သွင်းပြီး ခေါင်းကို ဘယ်ညာယမ်းသည်။ စိုးအောင်က နို့ကိုဆွဲသည်။ ရဲလွင်က လီးကို အပြင်ထုတ်လိုက်သည်။ ဖောက်ခနဲ မြည်သွားသော အသံနှင့်အတူ ခိုင်နှင်း၏ ဖင်ပေါက်မှာ ဟောင်းလောင်းကျန်နေခဲ့သည်။ ရဲလွင်တံတွေးတစ်ချက် ထွေးထည့်သည်။
စိ စိ.. ရဲလွင်က သူ့လီးခေါင်းကို သိပ်ထည့်ကာ ထိုးထည့်တော့ တံတွေးများဖြင့် တစိစိမြည်နေသည်။ ခိုင်နှင်းသည် နာသည်ဟု မညည်းအား။ စိုးအောင်လီးကို တစ်လှည့်ငုံကာ ချစ်မောင်လီးကို ကွင်းထုပေးရသည်။ စိုးအောင်က နောက်စေ့မှ ဆံပင်များကို ပင့်ကိုင်ကာ ပါးစပ်ကို လိုးနေသည်။ အောက်ကလည်း ဆောင့်တက်သည်။ ရဲလွင်ကလည်း ဖင်ကို ဆောင့်လိုးရာ တင်လုံးမှာ တုန်တုန်တက်သွားသည်။ ပါးစပ်ကလည်း ဟထားရသဖြင့် နောက်ကဆောင့်လိုက်တိုင်း ရှေ့ကလီးကို အဆုံးငုံပြီးသားလို ဖြစ်ကာ ပါးစပ်ဖြင့် ခံပေးသလို ဖြစ်နေသည်။ ဖင်ကို ငါဆော်ဦးမယ် ဟုဆိုကာ စိုးအောင်က နောက်သို့ ယွန်းရာ ရဲလွင်က တစ်ချက်ခပ်ပြင်းပြင်းဆောင့်ပြီး ထုတ်ပေးသည်။ ရှေ့ကိုလှမ်းကာ ပါးစပ်ထဲသိပ်ထည့်ဖို့ ပြင်သည်။ ဝတ်မှုံနှင့် မိုးယုတို့မှာ လက်ကို အပေါ်သို့မြောက်ကာ ကြိုးဖြင့် အချည်ခံထားရသည်။ လက်တစ်ဖက်နှင့် တစ်ဖက် မနီး။ ပါးစပ်ကို ဘုလုံးဖြင့် ပိတ်ထားသည်။ အဝတ်အစား အပြည့်အစုံ ပါသည့်အပြင် ဘော်လီလည်း အကြပ်၊ အတွင်းခံလည်း နှစ်အထပ်ထပ် ဝတ်ထားပေးသည်။
ထို့အပြင် ခြေနှစ်ဖက်ကြားတွင် တစ်ဖက်နဲ့ တစ်ဖက် မနီးအောင် ခေါင်းအုံးညှပ်ထားပေးသည်။ ခြေဖဝါးက ကြမ်းပြင်ကို မထိတထိဖြစ်နေသည်။ ဆက်နောင်က ကြိမ်လုံးဖြင့် တင်လုံးကို ခပ်ဆတ်ဆတ်ရိုက်သည်။ ဖြန်း…… အုဝု မိုးယုတစ်ယောက် မခံမရပ်နိုင်အောင် ဖြစ်နေသည်။ စောက်ရည်များ ထွက်နေသည်။ ဆက်နောင်က ဝတ်မှုံကို ရိုက်ပြန်သည်။ ဖြန်း…….. အု………. ဖုတ် ဖုတ် ဝု ဝု ဆက်နောင်က မိုးယုနှင့် ဝတ်မှုံတို့ရဲ့ တင်ကို ဖုတ်ခနဲပုတ်ပြီး ကုတ်လိုက်သည်။ မြင်ကွင်းထဲတွင် ခိုင်နှင်းကို ယောက်ျားလေးယောက်က ပက်ပက်စက်စက် ဝိုင်းလိုးနေကြသည်။ သို့သော်သူမတို့ကလည်း ခံချင်လောက်အောင် ဖီးလ်ကတက်နေသည်။ သို့သော် ဘယ်လိုမှ လုပ်မရ။ ရိုက်လိုက် ကုတ်လိုက်လုပ်တော့ ရုန်းကြသည်။ သည်အချိန်မှာ ဘယ်လိုလီးလာလာ၊ ဘာပဲ လုပ်ပေးရ လုပ်ပေးရ၊ ဘယ်လိုပဲ လုပ်လုပ်၊ ဘယ်နှစ်ယောက်ပဲလိုးလိုး ခံပေးချင်နေချိန် ဖြစ်သည်။ ခိုင်နှင်းက ဒူးထောက်ကာ မှောက်ပေးသည်။ ရဲလွင်နှင့် ချစ်မောင်က ဖင်ကို တစ်ချက်စီသွင်းသည်။ ခိုင်နှင်းကို မော့ခိုင်းသည်။ ခိုင်နှင်း၊ ဝတ်မှုံနှင့် မိုးယုတို့ အကြည့်ချင်းဆုံထားသည်။
ရဲလွင်က နောက်မှ ဒူးတစ်ဖက်ထောက်ကာ ခိုင်နှင်းဖင်ကို လိုးသည်။ နာသဖြင့် ခိုင်နှင်း ရှုံ့မဲ့နေသည်။ ရဲလွင်က ဖင်ထဲကထုတ်ပြီး စောက်ဖုတ်ကိုတစ်လှည့်လိုးသည်။ ကျန်သုံးယောက်က နောက်မှ ရပ်ကာ ကွင်းထုနေကြသည်။ ရဲလွင်နားတော့ ချစ်မောင်ဝင်သည်။ ခပ်ကြမ်းကြမ်း သွင်းလိုက်သဖြင့် ခိုင်နှင်းအော်ညည်းသည်။ ချစ်မောင်က ခပ်သွက်သွက်လိုးသည်။ တဗွက်ဗွက်မြည်နေသည်။ ချစ်မောင်လည်း ဖင်လိုးလို့ အားရတော့ စောက်ဖုတ်ကို သွင်းသည်။ စောက်ဖုတ်ကိုလိုးပြီး နားသည်။ ဘသက်အလှည့်ရောက်လာသည်။ ဘသက်က ပွင့်နေသော ခိုင်နှင်းဖင်ပေါက်ကို တံတွေးထွေးထည့်သည်။ လီးကို တံတွေးဆွတ်သည်။ လီးခေါင်းအရင်သိပ်ထည့်လိုက်ပြီး ခါးစောင်းကိုင်ကာ ဆောင့်ဆောင့်လိုးသည်။ ခိုင်နှင်းမှာ ခေါင်းများပင် စိုက်ကျနေသည်။ ဆက်နောင်က မော့နေဖို့ ပြောသည်။ ဘသက်က ဆက်လိုးသည်။ တဒုတ်ဒုတ်နဲ့ မြည်နေသည်။ ဘသက်က ဖင်သက်သက်လိုးပြီး နားသည်။ စိုးအောင် ဝင်ဆွဲပြန်သည်။ ခိုင်နှင်းက ပါးစပ်ကို မပွင့်တပွင့်ဟထားကာ ဒူးထောက်၍ မော့ပေးသည်။ စိုးအောင်က ဘေးမှနေ၍ မျက်နှာပေါ် ကွင်းထုချသည်။
တဗွက်ဗွက်နဲ့ ထုနေသော်လည်း လီးရည်က မထွက်သဖြင့် ခိုင်နှင်းလည်း မောမောနှင့် စုပ်ပေးလိုက်သည်။ ထွက်ခါနီးတော့ ခိုင်နှင်းမျက်နှာကို နည်းနည်း ဆုတ်ပေးသည်။ လီးရည်က နှုတ်ခမ်းတစ်ဝိုက်နှင့် အထက် ပါးပြင်ပေါ်သို့ တဗျစ်ဗျစ်ပန်းထွက်သည်။ အရှိန်ပါသဖြင့် နားထင်ဆံစထိ စိုကုန်သည်။ လီးရည်လည်း များသည်။ ပါးပြင်တစ်ခုလုံး ဖွေးသွားသည်။ ရဲလွင်က ခိုင်နှင်းမျက်နှာတည့်တည့် ကွင်းထုသည်။ သူမပါးပြင်တွင် စိုးအောင်လီးရည်များ ရွှဲနစ်ကာ အများအပြားစီးကျနေသည်။ ရဲလွင်လီးရည်တွေလည်း တဗျစ်ဗျစ်ထွက်သည်။ မေးစေ့မှ နဖူးထိ တန်းခနဲ တန်းခနဲ ကျသည်။ ကုန်ခါနီးတော့ နှုတ်ခမ်းပေါ် ပိုကျသည်။ သူမမထွေး မမြိုဘဲ အတိုင်းထားသည်။ ဘသက်က ဆက်၍ မျက်နှာပေါ် ကွင်းထုချသည်။ ခေါင်းကို သေချာကိုင်ကာ လွတ်နေသော ပါးပြင်တစ်ဖက်ပေါ်သို့ လီးထိပ်နဲ့ ထောက်ကာ ကွင်းထုချသည်။ လီးရည်များ ပါးပြင်ပေါ် ပုံကာ ကျသည်။ ရွှဲနစ်ကာ အောက်နို့ပေါ်ထိ စီးကျသည်။ ချစ်မောင်က ခပ်လှမ်းလှမ်းကနေသာ ကွင်းထုချသည်။ ခပ်လှမ်းလှမ်းဆိုသော်လည်း မျက်နှာနှင့် ငါးလက်မလောက် အကွာကသာ ဖြစ်သည်။
သူမငြိမ်ငြိမ်မော့နေသော်လည်း ပထမတစ်ချက် နှာခေါင်း၊ ဒုတိယတစ်ချက် နားရွက် တတိယတစ်ချက် နားထင်နှင့် လည်ပင်းများသို့ကျကုန်သည်။ ပါးစပ်ထဲ ဝင်တာတွေ ထွေးလိုက် ဒီတိုင်းကိုယ့်ပါးစပ်ပေါ် ကိုယ်ပြန်ထွေး ခိုင်နှင်းက ပူစီပေါင်းများထနေသော လီးရည်ကို ထွေးထုတ်သည်။ လီးရည်များက နားရွက်တွင်လည်း တွဲကျနေသည်။ နို့ပေါ်သို့ တစ်စက်စက် ကျနေသည်။ ဆက်နောင်က မိုးယုနှင့် ဝတ်မှုံတို့ကို လွတ်ပေးသည်။ သို့သော် လည်ပင်းတွင် ခွေးလည်ပတ် ပတ်ပေးလိုက်သည်။ ပြောင်နေအောင် စားပေးကြ လီးရည်တို့ကို လျက်ခိုင်းလေသည်။ သူမတို့လည်း ဘာဖြစ်ဖြစ် အနေအထားတွင် ရောက်သဖြင့် စားလိုက်သည်။ မိုးယုက နားရွက်မှကပ်ပြီး တွဲကျနေသော ခပ်ခဲခဲ လီးရည်ကို စလျက်ပေးသည်။ နောက်ပါးပြင်တွင် အစင်းလိုက် ယိုနေသော လီးရည်ကို လျက်သည်။ သူမလျက်ရသမျှကို ဝတ်မှုံပါးစပ်ထဲ ထွေးထည့်ပေးသည်။ ဝတ်မှုံကို မျိုချသည်။ နောက် ဝတ်မှုံက ပြန်လျက်သည်။ ဝတ်မှုံလျက်၍ ရသမျှကို မိုးယုပါးစပ်ထဲ ထွေးထည့်သည်။ မိုးယုက မျိုချသည်။
ပထမတစ်ရက်ဟူသော အနေအထားတွင် ထိုမျှ အဆင့်ရှိနေပြီ ဖြစ်ရာ သူမတို့ ထိပ်လန့်ရမည်လား ဝမ်းသာရမည်လား မတွေးတတ်တော့။ မိုးယုနှင့်ဝတ်မှုံတို့ အချင်းချင်း နှုတ်ခမ်းစုပ်သည်။ အချင်းချင်း အင်္ကျီချွတ်သည်။ နို့သီးချင်းချင်း ပွတ်သည်။ ထမီချွတ်ကြသည်။ တစ်ယောက်ပေါင်ကြားထဲသို့ တစ်ယောက်ပေါင်တစ်ဖက်စီထည့်ကာ စောက်စေ့ချင်းပွတ်သည်။ သူမတို့ကို ခိုင်နှင်းအား တစ်ယောက်တစ်လှည့်ဖက်ကြ နမ်းကြ ဆွဲကြ ကိုင်ကြ နှိုက်ကြလုပ်နေသော ရဲလွင်၊ ဘသက်၊ ချစ်မောင်၊ စိုးအောင်နှင့်အတူ ယခုမှ ဘောင်းဘီချွတ်ပြီး ကွင်းစထုနေသော ဆက်နောင်တို့ဖြစ်သည်။ လာ မိုးယုနှင့် ဝတ်မှုံတို့နှစ်ယောက် ဆက်နောင်ပေါင်ကြားထဲတွင် ထိုင်ချပြီး လီးကိုစုပ်ပေးသည်။ ဝတ်မှုံက စစုပ်သည်။ မိုးယုက လပြွတ်ကိုပင့်ပေးထားသည်။ ဝတ်မှုံဖယ်တော့ မိုးယုက လပြွတ်ကို စုပ်ပေးသည်။ ဝတ်မှုံက ဆက်နောင်ပေါင်ကို ခွက အဖုတ်နဲ့ပွတ်ရင်း ကွင်းထုပေးရင်း လျှာနဲ့လျက်သည်။ မိုးယုက လပြွတ်ကို စုပ်ရင်းဆွဲကာ လွတ်သည်။ ဝတ်မှုကလည်း လီးထိပ်ကို စုပ်သည်။ မင်းတို့နှစ်ယောက် ကုန်းလိုက် မိုးယုနှင့် ဝတ်မှုံတို့က ကုန်းလိုက်သည်။
ပေါင်နည်းနည်းကား သူမတို့ကလည်း ခိုင်းသည့်အတိုင်းလုပ်သည်။ ဟေ့ သူငယ်ချင်းတို့ ဘယ်ဖင်ပေါက်က ပိုလန်းလဲ ဆန္ဒမဲလေး ပေးကြပါဦးကွ ချစ် ဆုံးဖြတ်ပေးကွာ ရဲလွင်က ခိုင်နှင်းကို ဖက်ရင်းထလာပြီး ပါးကို တရွှတ်ရွှတ်နမ်းကာ ပြောသည်။ အေး ဟုတ်တယ်၊ ခိုင်နှင်း မင်းဆုံးဖြတ် ဟုဆိုကာ ဆက်နောင်က ပြောလိုက်သည်။ တစ်ဆက်တည်းပင် ဆက်နောင်က မင်း လျက်ပေးရမှာပဲ၊ မင်း လျက်တဲ့ဖင်ကို ငါအရင်ချမယ် ခိုင်နှင်းက ဝတ်မှုံဖင်ကို လျက်ရန် တင်ကို ဖြဲလိုက်သည်။ မိုးယုက ခိုင်နှင်းဖြဲပေးထားသော ဝတ်မှုံဖင်ညှောင့်ရိုးပေါ်သို့ တံတွေးထွေးချသည်။ တံတွေးက ဝတ်မှုံ၏ ဖွေးနုနေသော ဖင်စီးကြောင်းအတိုင်း စီးဆင်းသွားပြီး ဖင်ပေါက်တည့်တည့်တွင် စုသည်။ ခိုင်နှင်းက စောက်ပတ်အထက်မှနေ၍ လျှာကို အပြားလိုက်ထားကာ ဖင်ပေါက်ကို လျက်သည်။ အွန်းးး ဝတ်မှုံသည် ဆက်နောင်လီးကို ငုံရင်း ဖင်မှ ခိုင်နှင်း၏ လျှာကြမ်းကြမ်းဖြင့် လျက်သည်ကို ဖီးလ်တက်သဖြင့် ညည်းမိသည်။ စီးထားသော သူမဆံပင်ကို ကိုင်ကာ သူမဖင်အလျက်ခံသည်ကို စောင့်ကြည့်ရင်း ပါးစပ်ထဲ လီးကို ထိုးသွင်းထားသော ဆက်နောင်၏ ပေါင်ကို ဖက်ထားသည်။
အ ကျွတ် ကျွတ် ဆက်နောင် စသွင်းပြီ။ မိုးယုက ဖင်ကို ဖြဲပေးထားသည်။ ခိုင်နှင်းက ဖင်ပေါက်ထဲတည့်အောင် သိပ်ထည့်ပေးသည်။ လီးခေါင်းကို အတင်းထိုးသိပ်ရသည်။ စောက်ပတ်ထဲဝင်သည်နှင့် မတူသဖြင့် ဝတ်မှုံမှာ တအင်းအင်းနဲ့ ညည်းရသည်။ တော်တော်လေးကို နာသည်။ လီးခေါင်းမြုပ်ကတည်းက နာနေရာ ဇွတ်ထိုးထည့်သည့် အနေအထားတွင် ပိုနာသည်။ နာလိုက်တာကွာ၊ ကိုယ့်လီးကို မန်းပေးပါဦး ဆက်နောင်က ခိုင်နှင်းကို လီးစုပ်ခိုင်းသည်။ ခိုင်နှင်းက ဝတ်မှုံဖင်မှ ထုတ်လာသော လီးကို စုပ်ပေးသည်။ ဝူးးး ဆက်နောင်က ပြန်လိုးသည်။ မိုးယုက ဖြဲပေးသည်။ တော်တော်ကြာတော့ မြုပ်ဝင်သွားသည်။ ဝတ်မှုံတော်တော် အော်ရသည်။ ချီးယား ဆရာ့ရဲ့ အောင်မြင်မှုအတွက် နောက်နောင်လည်း ဆရာသမား အသစ်ကလေးတွေ များများ ဖောက်နိုင်ပါစေ တစ်ယောက်တစ်ပေါက် ချီးကျူးကြပြီး အရက်ခွက်မကာ သောက်ကြသည်။ ဆက်နောင်က ဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲသည်။ ဝတ်မှုံမှာ ချွေးများပြန်နေသည်။ ဖင်ထဲတစ်ခုခုဆို့နေသလို ခံစားရသည်။ ဖင်ကို ငါးမိနစ်လောက် စိမ်လိုးပြီး စောက်ဖုတ်ကို တွယ်သည်။
ပုံစံပြောင်းကာ ဖင်ချလိုက် စောက်ပတ်လိုးလိုက်လုပ်သည်။ ဆက်နောင်ပြီးတော့ တော်တော်လေး မိုးချုပ်နေပြီ ဖြစ်သဖြင့် မောမောနဲ့ အိပ်ပျော်သွားကြသည်။ တော်တော်နဲ့ အိပ်မပျော်သူမှာ မိုးယုဖြစ်သည်။ အိပ်ပျော်သွားတော့လည်း ဖင်ကို ဝိုင်းလိုးကြသည်ဟု အိပ်မက်မက်သဖြင့် လန့်နိုးပြန်သည်။ အိပ်ပျော်အောင် တော်တော်လေး ကြိုးစားသော်လည်း အိပ်မရ ဖြစ်နေသည်။ ဖျတ်ခနဲ အိပ်ပျော်မည်လုပ်တော့ အိပ်ယာက နိုးနိုးချင်း မျက်နှာမသစ်သေးခင် မြင်ရတဲ့ ပုံစံဟာ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပကတိပုံစံ အစစ်ကွ၊ စိုးအောင်နဲ့ ချစ်မောင်က ခိုင်နှင်း၊ ရဲလွင်နှင့် ဘသက်က ဝတ်မှုံလေးနဲ့ မိန်းကလေးတွေရဲ့ ပကတိပုံစံ ဖြစ်တဲ့ သဘာဝအလှရဲ့ အရသာကို မျက်နှာ မသစ်ခင် တစ်ချီ ခံစားကြကွာ၊ ငါတော့ အားလုံး ကျက်သရေ မင်္ဂလာနှင့် ပြည့်စုံသွားအောင် သူ့ဖင်ကို ဟောဒီလီးနဲ့ ဖောက်ပေးမယ်၊ ကျေနပ်ကြလား မင်းကြီးများ ကျေနပ်ကြကြောင်းပါ ဘုရား။
သင့်လျှော်လျောက်ပတ်မှုကော ရှိရဲ့လား သင့်လျှော်ကြောင်းပါ ဘုရား ဆက်နောင်၏ သူမတင်ကို ပုတ်ကာ ပုတ်ကာ ပြောသောစကားကို သူတို့ပိုင်ဆိုင်သည့် တစ်ယောက်ထံ ချဉ်းကပ်ကြရင်း ကောင်းချီးသြဘာ ပေးနေကြသည်။ မိုးယုမှောက်အိပ်နေသည်။ ဆက်နောင်က သူမပေါင်ကြားထဲသို့ လေးဘက်ထောက် ဝင်လာသည်။ ပက် သူမဖင်ပေါက်ပေါ်တည့်တည့် တံတွေးစက် ကျလာသည်။ ဝူးးးးးး ဟူးးးးးးးး ဆက်နောင်က ခွေးလို အူကာ သရော်သည်။ နောက် လျှာပြားဖြင့် လေးငါးချက် ခွေးများ အမဲရိုးလျက်သလို သူမဖင်ပေါက်ကို လျက်သည်။ ထွီ ဆက်နောင်က သူ့လီးဆွတ်ဖုိ့ လက်ဝါးပေါ် တံတွေးထွေးချပြီး လီးကို သုတ်သည်။ မနက် ခြောက်နာရီထိုးနေပြီ ဖြစ်သော်လည်း အတော်မှောင်ရီနေသေးသည်။ သို့သော် မိုးယုတစ်ယောက်၏ ဖင်ပေါက်ထဲ လီးကြီး ပူခနဲ ထိုးဆင်းလာတော့ ပိုမှောင်သွားသည်…….ပြီးပါပြီ။
Categorized as အငျးဆကျ Tagged ပါကငျဖောကျမယျ